(No. 35, June 16, 2020)
၁။ တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦးကို စစ်ဆေးရန် စေလွှတ်ပေးရေး DKBA ထံ ပြည်နယ် နယ်လုံဝန်ကြီးအကြောင်းကြား
၂။ အငြင်းပွားမြေမှာ တပ် ဝင်ရောက်ထွန်ယက်မှုကို တောင်သူတွေ ကန့်ကွက်
၃။ ရသေ့တောင်၊အုန်းချောင်းတွင် AA နှင့်တပ်မတော် တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ ကျေးရွာသားထောင်နှင့်ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
၄။ KNU တပ်မဟာ ၅ နှင့် တပ်မတော်တို့ ၂ လအတွင်း တိုက်ပွဲ ၈၈ ကြိမ်ဖြစ်ဟုဆို
၅။ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ဒေသကြီး ၄ ခု ၌ ဝင်ပြိုင်မည် ဟု CNLD ပါတီ ပြော
၆။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တစ်ဆို့မှုဖြစ်စေသောကိစ္စများအား ကျော်လွှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေဟု NCA အကောင် အထည် ဖော်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်ရေးမှူး ပြောကြား
၇။ မြောက်ပိုင်း ၄ ဖွဲ့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အစိုးရဖိတ်ကြား
၈။ ဂွမြို့နယ်တွင် ALP/ALA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ပုဒ်မ ၆ ခုဖြင့် အမှုဖွင့်ထား
၉။ ရှမ်းမြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များ ကိုဗစ်ကာလ စားဝတ်နေရေး အလွန်ခက်ခဲနေ
၁၀။ မင်းတပ်တွင် ပြည်ပပြန် Quarantine ဝင်ရသူများ ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ် နေရဟုဆို
၁၁။ ရသေ့တောင် ဒုံးပိုက် နယ်ခြားစောင့်ရဲကို AA ဝင်တိုက်
၁၂။ လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဒေါလိုရှေးရွာအနီး လျှပ်စစ်တာဝါတိုင် အောက်ခြေတွင် မြေမြှုပ်မိုင်း နှစ်လုံး တွေ့ရှိ
၁၃။ ရွှေညောင်မြို့ Quarantine Center တွင် ထိုင်းမှပြန်လာသူ အမျိုးသမီး ၁ ဦးသေဆုံး
၁၄။ KIO ၏ COVID-19 ကော်မတီက အခြားရောဂါကာကွယ်ရေးများ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်
၁၅။ ကျောက်တော်မြို့လယ်၌ ရဲအရာရှိ ၁ ဦး သတ်ခံရ၍ သေဆုံး
၁၆။ ရေးတောင်ပိုင်း ဓနိကြာစံပြကျေးရွာ တည်ဆောက်ရေး ရွာသားအများစုလက်မခံ
၁၇။ ရခိုင်တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း ၁၀ဝ ကျော် ရှိလာ
၁၈။ ရန်ကုန်နှင့် မွန်ကရင်ဝန်ကြီးနှစ်ဦး ရေးရာနေရာအတွက် ပြန်လျှောက်ထားခြင်းမရှိ
၁၉။ သျှမ်းပြည်တွင်း နေရပ်ပြန် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၄ သောင်းကျော်ရှိ
၂၀။ ထိုင်းပြည်တော်ပြန် ၇၀၀ ကျော်အနက် ၄၄ ဦးကိုစစ်ဆေးရာ ပိုးမတွေ့
၂၁။ တောင်ကြီးရောက် ထိုင်းနေရပ်ပြန် ၂၀ဝ ဓာတ်ခွဲ အဖြေ Negative ဖြစ်
၂၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသမလုံခြုံမှုကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နုတ်ထွက်နေဟု ဒုဝန်ကြီးပြော
၂၃။ မဘိမ်းမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ်သိန်း ၁၄,ဝ၀ဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွ ဆေးများ ဖမ်းမိ
၂၄။ စစ်တွေဘဏ်မှ ငွေလုယက်မှုတွင် သံသယဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသူတစ်ဦးကို ချုပ်ရမန်ယူစစ်ဆေးနေ
မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်မှုရှိနေသည်ဆိုကာ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင် တပ်မတော် -DKBA မှ တပ်ရင်းမှူးအဆင့်ရှိသူ စောအေဝမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် စေလွှတ်ပေးရန် ကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်က KKO (DKBA)ထံ အကြောင်းကြား စာပေးပို့ထားသည်ဟု သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်မှုရှိကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိ၍ တရားဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ထံ အမြန်စေလွှတ်ပေးရန် ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်(ကိုယ်စား) နယ်လုံဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်မှ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲနှင့် DKBA ဖားအံ ဆက်ဆံရေးရုံးသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လွိုင်လင်၊ တောင်ကြီးကားလမ်း၊ ဟိုတင့်ကျေးရွာအနီးတွင် ICE (၁၆၁၅) ကီလိုနှင့် သယ် ဆောင်သူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး စစ်ဆေးချက်များအရ ၎င်းမူး ယစ်ဆေးဝါးများမှာ DKBA ( ၉၀၃) တပ်ရင်းမှ တပ်ရင်းမှူး အဆင့်ရှိသည့် စောအေဝမ်းနှင့် ပတ်သက်မှုရှိကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်နယ်လုံဝန်ကြီး ပေးပို့သည့် အကြောင်းကြားစာတွင် ထိုသို့ ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါအကြောင်းကြားစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် -DKBA စစ်ဦးစီး ချုပ်နှင့် ဌာနချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း DKBA ဖားအံဆက်ဆံရေးရုံးမှ ပြောဆိုသည့်အတွက် စစ်ဦးစီးချုပ် – ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမိုရှေးကို ကေအိုင်စီမှ ဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်သော်လည်း ဖုန်းဆက်သွယ်မှုမ ရရှိခဲ့ပေ။
ထို့အပြင် DKBA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောစတီးထံ ကေအိုင်စီမှ ယနေ့ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရာ အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာမှာ ဌာနချုပ်တွင် မရောက်ရှိသေးသည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် မသိရှိရသေးကြောင်းသာ ကေအိုင်စီသို့ ပြန် လည်ပြောဆိုသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%9b %e 1%80%84%e1%
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေတဲ့ ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမောဆိုမြို့နယ် ဒေါဆိုရှေ့ကျေးရွာက တောင်ယာတွေထဲမှာ တပ်မတော်က ဝင်ရောက်ထွန်ယက်နေတဲ့အပေါ် တောင်သူတွေကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ အမှတ် ၃၆၀ အမြောက်တပ်နဲ့ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေတဲ့ ဒေါဆိုရှေ့ကျေးရွာကတောင်ယာတွေထဲမှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တပ်ကဝင်ရောက် ထွန်ယက် သွားတာဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ တောင်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။
ဒေါဆိုရှေ့တောင်သူ ခွန်းသောမတ်စ် က တောင်သူတွေကိုတော့ ယာထဲ မဝင်ဖို့ပြောပြီး၊ တပ်က ဝင်ရောက်ထွန်ယက်သွား တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ “သူတို့အခု လာလုပ်သွားတာ ၃ ရက်လား ၄ ရက်လောက်ရှိပြီ၊ ကျနော်တို့ကိုကျတော့ မဝင်သေးနဲ့ အုံးလို့ ပြောပြီးတော့မှ အခုက သူတို့တပ်ဖက်ကနေ ကျနော်တို့တောင်ယာကို လာထွန်ထယ်သွားတဲ့ကိစ္စက ကျနော်တို့ အတွက် မတရားပါဘူး။” ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ဒေါဆိုရှေ့ရွာထဲက ယာမြေ ဧက ၂၀ဝ ကို အမှတ် ၃၆၀ အမြောက်တပ်က သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီယာတွေဟာ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကြတဲ့ မြေတွေဖြစ်တယ်လို့ တောင်သူတွေက ပြောပါတယ်။ လုပ်ကိုင်စားသောက်စရာ မြေနေရာ မရှိတဲ့အတွက် မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို စိတ်ပူပန်ရပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်ဆင်းရဲနေရ တယ်လို့ ဒေါဆိုရှေ့တောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ညားမာ က ပြောပါတယ်။
ဒေါ်ညားမာက တောင်ယာမြေ ဧက ၂၀ ဝန်းကျင် သိမ်းယူခံရပြီး လက်ရှိမှာတော့ စိုက်ပျိုးစားသောက်စရာ မြေနေရာမရှိ တော့လို့ ဆောက်နေဆဲ တိုက်ပုအိမ်ကလေးကိုလည်း မဆောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါဆိုရှေ့ကျေးရွာက တောင်သူတွေဟာ သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ တောင်ယာအပြင် တခြားလုပ်ကိုင်စားသောက်စရာ နေရာမရှိတဲ့အတွက် ပြန်ပေးဖို့ မြေသိမ်းခံရတဲ့ ခွန်းသောမတ်စ် က တောင်းဆိုပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကယားပြည်နယ်အစိုးရ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မြင့်ဝေ ကို ဇွန်လ ၁၀ ရက် နေ့က လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီး မေးမြန်းရာမှာတော့ သူ့အနေနဲ့ မသိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရာသီချိန်မှာ ဒေါဆိုရှေးတောင်သူတွေဟာ အဲဒီတောင်ယာမြေတွေထဲကို ဝင်ရောက်ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး ရာကနေ တပ်ပိုင်မြေထဲ ဝင်ရောက်ကျူးကျော် စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုပြီး ဒေါ်ညားမာ အပါအဝင် တောင်သူ ၁၉ ယောက်ကို အမှတ် ၃၆၀ အမြောက်တပ်က ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆/၁၊ ပိုင်နက် ကျူးကျော် မှုတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ တရားစွဲခံရသူတွေထဲက တောင်သူထက်ဝက်ခန့်က ရှစ်လခန့် အချုပ်ကျခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ထောင် ဒဏ် ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် တစ်သောင်းနဲ့ စီရင်ချက် ချမှတ်ခံရလို့ ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ကာ ပြန်လည်လွတ် မြာက်လာ ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တောင်သူတွေက သူတို့မြေယာတွေမှာ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးထွန်ယက်နိုင်ဖို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ပူးပေါင်းကြိုးစားသွားမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/demoso-disputed-land-06132020032529.html
၃။ ရသေ့တောင်၊ အုန်းချောင်းတွင် AA နှင့်တပ်မတော် တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ ကျေးရွာသား ထောင်နှင့်ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်နှင့် ၁၃ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသောအုန်းချောင်းကျေးရွာတောင်ဖက်၊ သမီးလှကျေးရွာအနားတွင် တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်အေအေတို့ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် ကျေးရွာ ၁၀ ရွာခန့်မှ ဒေသခံ ထောင်ချီ၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်း ဒေသခံများနှင့်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ရန်ကုန် ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ်က “တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာကတော့ မနေ့ ညနေ ၄ နာရီလောက်ကဖြစ်တယ်။ ညနေ ၅ နာရီကျော်ကျော် လောက်မှာ နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှု တွေရပ်သွားတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်။ ပစ်ခတ်မှုတွေက မနေ့ ည ၇ နာရီလောက် အထိရှိနေတယ်”ဟု ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊အုပ်ချောင်းကျေးရွာ၊သမီးလှကျေးရွာသစ်၊ သမီးလှကျေးရွာဟောင်း၊ ကုန်တန်း၊ အိုးဖောက်၊ ဈီးခေါင်း၊ မညှင်းတောင်၊ သပြေဆိပ်၊ ဇေယျာမြိုင် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံထောင်ချီ၍ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် သေကံကျေးရွာနှင့် ခွဆုံကျေးရွာများသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်း သိရှိရသည်။ အုန်းချောင်းကျေးရွာသား တစ်ဦး က”ရွာနားကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းရောက်နေတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ အခုနှစ်ဖက် တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာ။ မနေ့က စပြီး တော့ တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်။ အုန်းချောင်းကျေးရွာမှာ လယ်ထွန်တဲ့ လယ်သမားတွေကိုပစ်ခတ် တာတွေလုပ်တယ်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာတော့မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ရွာအပါအဝင် ကျေးရွာတော်တော်များများ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်” ဟုပြောသည်။
တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနောက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ကျေးရွာများသို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသဖြင့် ကျေးရွာသားများ ကြောက်လန့်၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပြီး တိုက်ပွဲကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမည်ကို စိုးရိမ်၍ ထွက်ပြေး ကြသူများလည်း များပြားကြောင်းသိရှိရသည်။ တိုက်ပွဲကြောင့် လက်ရှိအချိန်တွင် အရပ်သားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည်ဆို သော သတင်းများမကြားရသေးကြောင်း ဒေသခံများကပြောဆိုသည်။ ယမန်နေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး နောက် ပိုင်း ရေစိုးချောင်းဗျူဟာနှင့် မေယုမြစ်ထဲရေတပ်များက လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ကူပေးမှုများရှိသည်ဟု ဒေသခံများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များထံမှ သိရှိရသည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/ 06/%e1%80%9b%e1%80 %9e%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) တပ်မဟာ (၅) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၃ ရက်အထိ ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ပေါင်း (၈၈) ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KNU စည်းရုံးရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ ထံမှ သိရသည်။ ထိတွေ့ တိုက်ပွဲများအတွင်း KNU တပ်မဟာ (၅)ဘက်က ထောင်ထားသော မိုင်း ၁၃ လုံးကို တပ်မတော်စစ် သည်များနင်းမိခဲ့၍ စစ်သည် ၃၀ ကျဆုံးကာ ၃ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNU သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနခွဲကဆိုသည်။
မြန်မာတပ်မတော်သည် သတ်မှတ်နယ်မြေများကို ကျော်လွန်၍ လှုပ်ရှားသွားလာခြင်း နှင့် တပ်စခန်းများ လာရောက်ချထား ခြင်းကြောင့် KNU ၏ မူတြော်ခရိုင်ရှိ တပ်မဟာ (၅) ၏ နယ်မြေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတပ်များနှင့် ထိတွေ့ကာ ပစ်ခတ်မှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။ ထိတွေ့ ပစ်ခတ်တိုက်မှုများကြောင့် တပ်မတော်သည် လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်၏ လက်နက်ကြီးကြောင့် ရွာသား ၃ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိခဲ့ပြီး၊ ရွာ ၄ ရွာမှ အရပ်သား ၅၇၂ ဦး ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်ရကြောင်း KNU ၏ ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ အသေးစိတ်မေးမြန်းရန် KNU တပ်မဟာ (၅) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စောကလယ်ဒိုးထံ ဧရာဝတီက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပေ။ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကမူ ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၃ ရက်အထိ ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်မြို့နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် တို့တွင် တပ်မတော်နှင့် KNU တပ်မဟာ (၅) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။
“အဓိက ဖြစ်ပွားတဲ့ ပုံစံကတော့ တပ်စခန်းတွေကို လာရောက်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တဲ့ ဟာမျိုးတွေ များတယ်။ လမ်းမပေါ် မိုင်းထောင်မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်တာများပါတယ်။ အကြိမ်ရေကတော့ ၈၈ ကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတာလည်း မရှိပါဘူး”ဟု တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ရှင်းပြသည်။ KNU တပ်မဟာ ၅ မှလည်း ၎င်းတို့၏ တပ်ရင်း ၁၀၂ လက်အောက်ခံ တပ်ခွဲ (၃) နှင့် တပ်ခွဲ (၄) တို့သည် ပြီးခဲ့ သည့် မေလ ၃၀ ရက်တွင် မထောရွာအနီး တပ်စွဲထားသော တပ်မတော်တပ်စခန်းတခုကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
KNU အဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့် တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထား သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင်အစိုးရနှင့်လက်တွဲကာ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းက မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်ရှိ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ တပ်မဟာ (၁) ဖွင့်ထားသည့် COVID– 19 စစ်ဆေးရေးဂိတ် အပါအဝင် ဖာပွန်ခရိုင် ဒွဲလုံမြို့ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များနှင့် ပတ် သက်၍လည်းကောင်း သံတောင်ကြီးနှင့်ဖာပွန်မြို့နယ်တို့တွင် လမ်းဖောက်လုပ်နေသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း တပ်မတော်နှင့် KNU ကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/13/2
ချင်းတိုင်းရင်းသားပါတီ ၃ ခု ပေါင်းစည်းထားသည့် ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (CNLD) ပါတီအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ် ရှိ မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးအပြင် စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရှိ ချင်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာ ဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ CNLD ပါတီ ပူးတွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ပူးနိုထန်ကပ်က“ကျနော်တို့ကတော့ ချင်းပြည်နယ်က မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးပြိုင်မှာပါ။ မကွေးတိုင်းနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မှာလည်းဝင်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ရှိခဲ့ရင်တော့ ချင်းတိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးနေရာ ဝင်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ် ၆၀ လောက်ကို ဝင်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ် နေတယ်”ဟု ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် မြို့နယ် ၉ ခု ရှိပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁၈ နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၉ နေရာနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နေရာရှိကာ စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၃၉ နေရာ ရှိကြောင်းသိရသည်။ CNLD ပါတီ အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် ၃၉ ခုလုံးအပြင် မကွေးတိုင်း၌ ချင်းတိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး မဲဆန္ဒနယ်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ အပါအဝင် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ် ၇ ခု ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၌ ချင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး မဲဆန္ဒနယ်၊ တမူးနှင့် ကလေးမြို့နယ်တို့၌ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံး ဝင်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း ချင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာ ဝင်ပြိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း CNLD ပါတီ ထံက ဆိုသည်။ ပူးတွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ပူးနိုထန်ကပ်က“ကျနော်တို့က ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးရာမှာ လူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးကို အဓိက ဦးစားပေးပါတယ်။ ချင်းလူမျိုးထဲမှာ နိုင်ငံခြားကနေ Political Science (နိုင်ငံရေး သိပ္ပံ) မာစတာတန်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရသူ တွေရှိတယ်။ အဲဒီလို လူတွေကို ဦးစားပေးပါတယ်။ ယခင်တုန်းက ဧပြီလကုန်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း အကုန်ပို့ဖို့ လုပ်ထားပေမယ့် ကိုဗစ်ဖြစ်လာလို့ ဇွန်လကုန်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း အကုန်ပို့ဖို့ ညွှန်ကြားထား ပါတယ်” ဟု ပြော သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ပါတီ ၃ ခုဖြစ်သည့် ပူးနိုထန်ကပ် ဦးဆောင်သော ချင်းတိုးတက်ရေး ပါ တီ (CPP) ၊ ပူးဇိုဇမ် ဦးဆောင်သော ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (CNDP) နှင့် ဦးငိုင်ဆတ် ဦးဆောင်သော ချင်း ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ (CLD) တို့ ပူးပေါင်း၍ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (CNLD) ပါတီကို ပြန်လည် တည် ထောင်ကာ ပြည်ထောင်စုရွေးကာက်ပွဲကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ချင်းပါတီ ၃ ခု ပူး ပေါင်း၍ CNLD ပါတီ တည်ထောင်ကာ ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အင်အားကြီး ပါတီများကို ယှဉ်ပြိုင်သွားရန် ပြင်ဆင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်၌ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ် စုစုပေါင်း ၃၉ နေရာ ရှိသည့်အနက် NLD ပါတီက ၂၈ နေရာ၊ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ZCD) ပါတီက ၆ နေရာနှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) က ၅ နေရာ အနိုင် ရရှိခဲ့သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/16/224709.html
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တစ်ဆို့မှု ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ် သက်၍ ကျော်လွှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ကို ရှာဖွေနေကြောင်း NCA ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည့် NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာမူဘောင် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ရဲဘော် မျိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် အတွင်းက ကျင်းပခဲ့သော ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးအပြီး ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်၊ ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ရေးဟူသောအချက် များနှင့် ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တစ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
“တစ်ဆို့နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အဲဒီတစ်ဆို့နေတဲ့ အ ကြောင်းအရာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ခွဲမထွက်ရနဲ့တစ်ဆို့နေတာရှိတယ်။ တစ်ခုတည်းသောတပ်မတော်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာနဲ့ တစ်ဆို့နေတာရှိတယ်။ ဒီတစ်ဆို့နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျော်လွှားနိုင် မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရှာနေတယ်”ဟု ရဲဘော်မျိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။ လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သည့် တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ထားရှိ ရေးနှင့်ခွဲမထွက်ရေးဟူသောကိစ္စများသည် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမည့်ကိစ္စရပ်များဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သီးခြားဆွေးနွေးမှုမရှိသေးကြောင်း ရဲဘော်မျိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။ “အဲဒီအကြောင်း အရာသက်သက်တော့ ကျွန်တော်တို့ မဆွေးနွေးဘူး။ ဒါတွေကျော်လွှားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ နေပါတယ်”ဟု ရဲဘော် မျိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်က တင်သွင်းခဲ့သည့် တစ်ခု တည်းသော တပ်မတော်ထားရှိရေးကိစ္စကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များကလက်ခံသော်လည်း ယင်းကိစ္စအားမည်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည်ဟူသည့် နည်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော် နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြား သဘောထားကွဲလွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်ဆို့သွားသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ပြန်လည်ရှေ့ဆက်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တစ်ဖွဲ့ချင်း ဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့ဖြင့် ဖြစ်စေ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီတွင် ရှစ်ကြိမ်မြောက် JICM အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ တရားဝင်အစည်းအဝေးများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ခဲ့သည်။ https ://news-eleven.com/article/178333
မြန်မာအစိုးရက မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ KIA, AA, TNLA နဲ့ MNDAA တို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဒီလ ဆန်းပိုင်းက ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုလို အစိုးရနဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေး က PCG (Peace-talk Creation Group) ခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး ရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာ ကတဆင့် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်လို့ PCG အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစန်းအောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
AA ပြောခွင့်ရ ခိုင်သုခက အခုလို အစိုးရဖက်က ဖိတ်ကြားချက်ကို ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က ရရှိခဲ့ပြီးနောက် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်း နေကြောင်း၊ အစိုးရဖက်က ကျိုင်းတုံမှာတွေ့ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ပြဿနာကြောင့် သူတို့အဖွဲ့ သွားရောက်ဖို့ အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် AA ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အစိုးရက ကြေညာထားတဲ့ အတွက် လုံခြုံရေးအရလည်း စဉ်းစားရကြောင်း၊ အင်တာနက်ကနေ ဗီဒီယိုနဲ့ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးဖို့ထက် လူချင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ သူတို့အဖွဲ့က လိုလားကြောင်း RFA ကို ပြောပါတယ်။
တပြိုင်နက်မှာပဲ အစိုးရနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတခုကို နေပြည်တော်မှာ လာမယ့် ၂၃ ရက်နေ့ လောက် ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ PCG အဖွဲ့ဝင် ဦးစန်းအောင် ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေအရ ဒီနှစ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တခုလောက်ပဲဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အစိုးရဖက်က ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းတယ်၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတွေများများလို တယ်လို့ သူက ဝေဖန်ပါတယ်။
CPR Center for Peace and Reconciliation ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဗဟိုဌာနညွန်ကြားရေးမှူး ဦးညိုအုန်းမြင့် က အဲဒီလို ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်း ခဏတာဖြစ်စေ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ သင့်တယ်လို့ အကြံပေးပါတယ်။ အစိုးရအသိုင်းအဝန်းနဲ့ နီးစပ်သူတွေကရော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေကပါ တညီတညွတ် ပြောဆိုနေကြတဲ့အချက်ကတော့ မြန်မာပြည်ဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ https://www.rfa.org/burmese/ news/peace-kia-aa-mndaa-tnla-06122020192805.html
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဂွမြို့နယ်(ခွဲ) ကျိန္တလီမြို့တွင် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်/ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALA/ALP) အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို ပုဒ်မ ၆ ခုဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ကျိန္တလီနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးရဲအုပ် ကျော်လွင်ဦး က ပြောသည်။
၎င်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သည် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ကျိန္တလီဒေသသို့ ရောက်ရှိလာကာ လိုင်စင်မရှိဘဲ ကျောက်ထုတ် လုပ်ခြင်း၊ သဲထုတ်လုပ်ခြင်း စသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ‌ဒေသခံများကို ဆဲဆိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း စသည့် ကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ဒေသခံများကဆိုသည်။“ကျနော်သူတို့ (ALA တပ်ဖွဲ့ဝင်) သဲကျောက်လုပ်နေကြတာကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖို့လုပ်တော့ ဘက်ဖိုးနားက ထွက်လာပြီးတော့ ကျနော့်ကိုမေးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့လာတာလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ကမလို ဘူး ဘယ်ကောင်မှ ရိုက်ခွင့်မရှိဘူး။ ငါတို့ ရခိုင်အချင်းချင်း မသတ်ချင်ဘူး၊ ငါတို့လူသတ်လာတာ များနေပြီဆိုပြီးတော့ ဓါးနဲ့ ကျနော့် လည်ဂုတ်ကို လှီးဖို့လုပ်တယ်”ဟု အမှုဖွင့်ထားသူ ဦးချစ်စမ်းမောင်က ရှင်းပြသည်။
ALA တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးခိုင်နိုင်လင်း၊ ဗိုလ်ကြီးခိုင်အောင်လင်းနှင့် ခိုင်ပြည်သိန်းတို့ကို ကျိန္တလီမြို့အပိုင် ဘိုက လေး ကျေးရွာသားအချို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၂၉၄၊ ၃၅၂၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄၊ ရေအရင်းအမြစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၆ တို့အပြင် ဆေးကောင်စီ ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၅၈ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ထာကြောင်း စခန်းမှူးကပြောသည်။ လက်ရှိ အချိန်၌ အမှုဖွင့်ခံထားရသူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြ၍ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်၍ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေတပ်မတော် (ALA) စစ်ရေးကော်မတီက ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်စိုးမြက အဆိုပါနေရာတွင် သဲ၊ ကျောက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့များသာမဟုတ်ဘဲ ဒေသခံများပါ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။“အဲဒီမှာလုပ်နေတာ ကျနော်တို့ လူတွေတင်မဟုတ်ဘူး၊ ရွာသားတွေလည်းပါတယ်။ ရွာသားတွေလုပ်လို့ ကျနော်တို့လည်း လုပ်လို့ရတယ်ထင်ပြီးလုပ်တာ။ ရွာသားတွေကို တရားမစွဲဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေကို တရားစွဲတော့ တမင်တရားစွဲသလို ဖြစ်နေတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်၍ပြောသည်။ ယင်းသို့ အမှုဖွင့်လှစ်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက် ရေးပါတီအနေဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ခိုင်စိုးမြကဆိုသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73456
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် မန်ဝိန်းကြီးဒေသအတွင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာစစ်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများ (IDPs) များ သည် ကိုဗစ်ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများရှိနေခြင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက တာဝန် ယူဆောင်ရွက်ပေးရန် စစ်ရှောင်များက မျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် စစ်ရှောင်ပြည်သူများအရေး ဆောင်ရွက်သူ ဦးနောင်လတ်ကပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ ဒေသအတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာစစ်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများ (IDPs) စခန်း ၃၉ ခုရှိပြီး လူဦးရေ ၁၄ဝဝဝ နေထိုင်ကြောင်းကာ လက်ရှိချိန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် စခန်းပြင်ပတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ကန့်သတ်ချက်များရှိနေကြောင်း ၎င်းကပြောဆိုသည်။
“အဓိကကတော့ တရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ စခန်းတွေထဲကသူတွေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်တယ် ပေါ့။ နေ့စားအလုပ်သမားတွေအဖြစ်ပေါ့။ အဲလိုမျိုး အရင်တုန်းက အပြင်မှာသွားအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေက ပြန်လာရင် ကိုဗစ်- ၁၉ ကြောင့် စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ခံရတော့ နောက်ပြီးတော့ စခန်းမှာရှိတဲ့ လူတွေကိုလည်း အပြင်ကိုမသွားခိုင်း တော့တာကြောင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့ စားဝတ်နေရေး ဒုက္ခရောက်နိုင်တာတွေရှိတာပေါ့။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက စားနပ်ရိက္ခာအတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးဖို့ မျှော်လင့်တာပေါ့ ” ဟု ဦးနောင်လတ် ကပြောဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် IDP စခန်းများတွင် နေထိုင်သူများက ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ် ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက် ၆ ချက်ပါသော သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ရေရှည်နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်များ စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှုများအား ခြွင်းချက်မရှိ ရပ်တန့်ရန်၊ ကိုဗစ်ကာလ ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ စခန်းတွင်းရှိ IDPS များသည် စခန်းပြင်ပသို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေခြင်းကြောင့် IDPS များအား ရေရှည်စားဝတ်နေရေး (စားနပ်ရိက္ခာ) လုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မကြာမီ ကျောင်းဖွင့်ကာလရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် IDPS စခန်း များရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် အခြေခံပညာအခွင့်အရေးတန်းတူရရှိရေး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက လမ်းညွှန်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ သင်ထောက်ကူများ ဆရာ၊ဆရာမများ စာသင်ဆောင်များအား လုံလောက်စွာပံ့ပိုးပေးရန်လည်း တောင်းဆိုချက်တွင်ဖော်ပြ ထားသည်။
နိုင်ငံတကာ စစ်ဘေးရှောင်သူများ အိုးအိမ်မြေယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့်အညီ နေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ၏ မူရင်းကျေးရွာဒေသရှိ မြေယာနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် စသည့်အချက်များကိုလည်း တောင်းဆိုထားသည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/06 /%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80
မင်းတပ်မြို့တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အစီစဉ်အရ Quarantine ဝင်ရသူ ပြည်ပပြန်လာသူများမှာ ကိုယ့်စရိတ် နှင့်ကိုယ်နေရကြောင်း ဒေသခံများထံသိရသည်။ Quarantine ဝင်ရသူများကိုကူညီပေးနေသော မင်းတပ်မြို့ရှိ ဒေသခံ တစ် ဦးက “အခု Quarantine စုစုပေါင်းရင် ၁၁ ယောက်ရှိပြီ ဒီလို Quarantine ဝင်နေတဲ့ချိန်မှာ အစားသောက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အချို့က အရမ်းခက်ခဲတယ် တချို့က မင်းတပ်မြို့နယ်မှာ ရွာမှာနေတဲ့ လူတွေဆိုတော့ သူတို့ကို ကူညီပေးမဲ့လူမရှိရင် အရမ်း ခက်ခဲတယ် နောက်ပြီးလက်ရှိ Quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေကလည်း သူတို့စရိတ်နဲ့ သူတို့နေနေရတယ်လို့သိရတယ်”ဟု ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ်အားလုံးကို ၄ လပိုင်းလောက်မှ စတင်ပြီး Quarantine ဝင်နေရသူများကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ ကြေးများ ပေးထားသည်ဟု သိရသော်လည်း မင်းတပ်တွင် ထမင်းဖိုးများ ပေးရသည်ဟု Quarantine များကို ကူညီဆောင် ရွက်ပေးနေသည့် အသင်းဖွဲ့များကပြောသည်။ မင်းတပ်မြို့နယ်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဖက်မှတာဝန်ရှိသူများမှ ပြည်ပပြန် Quarantine ဝင်နေရသူများကို မြို့အစီစဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ အစိုးရမှထောက်ပံ့ပေးသည့် ငွေကြေးများကို တာဝန်ရှိသူများကို သေချာပေး လိုက်ကြောင်း မင်းတပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမင်းဧရာထိုက်က ပြောသည်။
မင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမင်းဧရာထိုက်က “မြို့အစီစဉ်နဲ့ ကျတော်တို့က ဒီ Quarantine ဝင်တဲ့လူတွေကိုကျွေးမွေးတယ် နောက်ပြီး ချင်းပြည်နယ် အစိုးရကလည်း ဒီဟာနဲ့ပက်သက်ပြီး ပေးတယ် အဲဒီပေးတဲ့ ဟာတွေကိုလည်း Quarantine ဝင်တဲ့ လူတွေကို ချက်ပြုတ်လုပ်ပေးတဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေကို ပေးတယ် အဲဒါကို မပေးဘူးလို့ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ လျှောက်တင် နေကြတာ”ဟု ပြောသည်။ မင်းတပ်မြို့တွင် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က မလေးရှားမှ ပြန်လာပြီး Quarantine ဝင်သူ တစ်ဦးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ case-232 ကို ဟားခါးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွေ ပို့ဆာင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73473
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဒုံးပိုက် နယ်ခြားစောင့် ရဲကင်းစခန်းကို ဇွန်လ ၁၃ ရက် နံနက် ၅ နာရီဝန်းကျင် အချိန်ခန့်က ရက္ခိုင့် စစ်တပ် (AA) အဖွဲ့က လာရောက်တိုက်ခဲ့သည့်အတွက် တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက “ ဒီနေ့ မနက် ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ ဒုံးပိုက် နယ်ခြားစောင့်ရဲကင်းစခန်းကို AA အဖွဲ့က လာရောက် နှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်တာရှိတယ်။ ၁၅ မိနှစ်ခန့်လောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဆုတ်ပြေးသွားတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတာရှိတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း ကာ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်းလည်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဒုံးပိုက်ကျေးရွာအနီးရှိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၁ ဦးက ယနေ့ မနက်ပိုင်းက အဆိုပါ နယ်ခြားစောင့် ရဲ စခန်းဘက်မှာ နှစ်ဘက်အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်သံများကိုကြားရသော်လည်း ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမသိရှိကြောင်း ပြောသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက “ဒီနေ့ နံနက် ၅ နာရီလောက်မှာ အဲဒီစခန်းဘက်က အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်သံတွေတော့ကြား တယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကျနော်တို့လည်း မသိဘူး။ လူနာတင်ကား တွေတော့ သွားတာတွေ့တယ်။ ဒုံးပိုက်ရွာသားတွေ စိုးရိမ်ပြီး ရွာကထွက်ပြေးနေကြလို့ ဖုန်းဆက်လို့လည်း မရဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းက ဒုံးပိုက်နယ်ခြားစောင့်ရဲကင်းစခန်းမှာ ပင်လယ်ကမ်း ကမ်းခြေအတိုင်း ဖောက်လုပ်ထားသည့် အငူမော် – မောင်တော် ကား လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိသော အငူမော် နယ်မြေရဲစခန်း လက်အောက်ခံ ရဲကင်းစခန်း တခုလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုရဲစခန်းများအား တိုက်ခိုက်သည့် ဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် မိသားစုဝင်များ ဖမ်းဆီးခံရမှုရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် AA အဖွဲ့က ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ နယ်မြေလုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေ သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို AA အဖွဲ့က လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ စစ်ရာဇဝတ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်ကြောင်း တပ်မတော် က ပြောဆို ထားသည်။
ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်းအတွင်းက ချင်းပြည်နယ် ၊ပလက်ဝ မြို့နယ်အတွင်း ဒဏ်ရာရ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆေးကုသနေသော ယာယီစခန်းတခုကို တပ်မတော်က အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက် လက်တုန့်ပြန်သည့် အနေဖြင့် ထိုသို့ သဇင်မြိုင် ရဲကင်းစခန်းအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း AA အဖွဲ့၏ မေလ ၂၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဆိုသည်မှာ တပ်မတော်လက် အောက်တွင်ရှိပြီး တပ်မတော် ၏ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ရဲစခန်းများကနေ လက်နက်ကြီးယာယီ စခန်းများထိုင်ကာ ပစ်ခတ်မှုများရှိ သည့်အတွက် ရဲစခန်းများကို တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း AA အဖွဲ့က ယခင် ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/13/224572.html
လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဒေါလိုရှေးရွာအနီး လျှပ်စစ်တာဝါတိုင်အောက်ခြေတွင် မြှုပ်ထားသောမိုင်းများပေါ်လာသဖြင့် အနီးရှိ တောင်သူလယ်သမားများမှာ ပေါက်ကွဲထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြရကြောင်းသိရသည်။“လယ်ပိုင်ရှင်က လယ်သွားထယ် ရင်းနဲ့ သူရဲ့တာဝါတိုင်အောက် သူချောင်းကြည့်တာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကို လာအကြောင်းကြားတာပေါ့။ တစ်လုံးမဟုတ် နှစ်လုံး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ အခုလောလောဆယ်တွေ့တာတော့ နှစ်လုံးပေါ့၊ တိုက်မိုင်းနဲ့နင်းမိုင်းတစ်လုံးပေါ့”ဟု ဒေါလိုရှေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခူးရှားရယ်က ပြောကြားသည်။
လယ်ပိုင်ရှင်ခူးငါးရယ်၏ လယ်ထဲရှိ တာဝါတိုင်အမှတ် ၁၀၈ အောက်ခြေတွင် တိုက်မိုင်း နှင့် နင်းမိုင်း နှစ်လုံးကို ဇွန် ၁၀ ရက် က လယ်ထွန်ရာမှတွေ့ရှိသဖြင့် ဇွန် ၁၁ ရက်တွင် တပ်က ဝါးဖြင့် လာရောက်ခြံစည်းရိုးခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“အုတ် တံတိုင်းနဲ့ခတ်ရင်ပိုသေချာတာပေါ့။ ဝါးနဲ့ခတ်ရင်အဆင်မပြေဘူး။ တစ်နေ့ မဟုတ်ရင် တစ်နေ့တော့ပျက်မှာပဲ။ ခြံကာလိုက် ရင် မြက်တွေဘာတွေထူလာရင် နွားက သူ့အစာတွေ့ရင်တော့ ဝင်မှာပဲ။ လောလောဆယ်ကတော့ အုတ်တံတိုင်းပဲကာ စေချင်တယ်” ဟု ဒေါလိုရှေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခူးရှားရယ်က ပြောကြားသည်။
ဒေါလိုရှေးကျေးရွာသည် လျှပ်စစ်မီးစတင်ရရှိခဲ့သည်မှာ ငါးနှစ်ခန့်သာရှိသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၃၀ အတွင်း တာဝါတိုင် များအား ဝါးဖြင့်ကာရံပေးရခြင်း၊ ညကင်းများအား အလှည့်ကျစောင့်ပေးရခြင်း၊ လုပ်အားပေးအဖြစ်ခေါ်ယူသဖြင့် အခမဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးရခြင်းများရှိခဲ့ကြောင်း၊ တာဝါတိုင်အောက်ခြေသို့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဝင်ရောက်ရာမှ ပေါက်ကွဲပြီး လူကိုပါ ဗုံးစထိမှန်ခဲ့ခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/178458
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရွှေညောင်မြို့၊ သုခချမ်းသာရပ်ကွက်ရှိ အမှတ် (၁) တည်းခိုရေးတပ်စခန်း Quarantine Center မှာ အမျိုးသမီးတဦး ဇွန် ၁၄ ရက် မနက်ပိုင်းက သေဆုံးသွားတယ်လို့ ရွှေညောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူမှာ နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူဖြစ်ပြီး ဇွန် ၁၀ ရက်နေ့မှ ရွှေညောင်မြို့ Quarantine Centre ကို မြဝတီ ကတဆင့် ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေညောင်မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသက်ဦးမောင်က “ဇွန် ၅ ရက်နေ့က မြဝတီ Center မှာ ဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီး စစ်ဆေးထားတယ်။ မြဝတီဆေးရုံမှာ တက်ခဲ့တယ်။ သူက မွေးရာပါ နှလုံးအပေါက်ပါ နှလုံးအားနည်းသူပေါ့။ အဲဒီရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတက် တယ်။ ဆေးမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။ ၅ ရက်နေ့က ယူထားတဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာက negative အဖြေထွက်တယ်။ ကျနော်တို့ Center ကို ၁၀ ရက်နေ့ ရောက်လာတယ်။ ဒီနေ့မနက် Center မှာရှိသူအားလုံး ဓာတ်ခွဲနမူနာယူဖို့ လာတာ မနက်စာစားဖို့ သူ့ကိုနှိုးတော့ နှိုးလို့မရတော့ဘူး၊ ကျန်းမာရေးဆရာတွေ စစ်ဆေးတဲ့အခါ သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားတယ်လို့ သုံးသပ်ထားပေမယ့် သေချာအောင် ဓာတ်ခွဲနမူနာ ယူပြီး ဓာတ်ခွဲဌာနကို ပို့ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူမှာ ကျိုင်းတုံမြို့၊ မိုင်းယောင်းကျေးရွာနေ အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုးသမီး ၁ ဦးဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ကနေပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူအမျိုးသမီးဟာ ရွှေညောင်မြို့ Quarantine Centre မှာ တခန်းတည်း အတူနေသူ ၁၆ ဦးရှိပြီး Center တခုလုံးမှာ မြဝတီကပြန်လာသူ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၇၃ ဦး ရှိပါ တယ် http://burmese.dvb.no/arch ives/394135
ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ဗဟို COVID-19 ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေး ကော်မတီက လက်ရှိလုပ်ဆောင် နေသော COVID-19 ကပ်ရောဂါအပြင် အခြားသော ရောဂါများကာကွယ်ရေးများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ United For Health (COVID-19 Response Group Kachin State) မှာ လက်တွေ့ ဦးဆောင်နေသော ဒေါ်လဘန်ခေါန်ဂျာ က မိုးရာသီရောက်လာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အခြားကူးစက်ရောဂါများနှင့် COVID-19 တွဲပြီး ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြော သည်။
“ကျမတို့လည်း အခု ပိုပြီးမှ သတိရှိရမယ်၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဒီမိုးတွင်းကာလက COVID-19 ကိုပိုပြီးမှ အားပေးတဲ့ သဘာဝတရား ကျမတို့မှာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နောက်နှစ်နွေရာသီအထိ သတိရှိနေဖို့လိုပါတယ်၊ ဥပမာ COVID က သွေးလွန် တုပ်ကွေးနဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါရောပြီး ရောဂါလက္ခဏာ မပြပဲဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် ရောဂါကို ကာကွယ်တဲ့ အချိန် မှာ COVID-19 တစ်ခုကိုပဲ ကာကွယ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ တခြား ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်း အတူကာကွယ်နိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်း သတိထားရမယ်”ဟု ပြောသည်။ COVID-19 တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကာကွယ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ အခြားရောဂါများကိုလည်း ပူးပေါင်းကာကွယ်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်လဘန်ခေါန်ဂျာ က ပြောသည်။
COVID-19 ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးကော်မတီ၏ စတုတ္ထအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းကို လည်း KIO ဗဟိုကော်မတီ က ဖွဲ့စည်းထားသည့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးလဖိုင်ဟိန်းဝမ် က ပြောသည်။“ကွာရန်တင်းစခန်းနဲ့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့ လက်တွေ့ ဦးဆောင်နေတဲ့ ကော်မတီတွေက အလုပ်ကို ပိုမိုထိ ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေထဲကတချို့ စည်းကမ်းချက်တွေ ကို ပြန်လည်ပြုပြင်တာပါ”ဟု ပြောသည်။
ယခု အစည်းအဝေးတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေများထဲ ဌာနဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စာသင် ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးကြသည်။ အစည်းအဝေးကို ကေအိုင်အိုဌာနချုပ် လိုင်ဇာ ရှိ အစိုးရမဟုတ်သော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ (NGO များ)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များ (INGO များ)၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ https:// www.bnionline.net/mm/news-73438
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့လယ်တွင် ယမန်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ ခန့်က ရဲအရာရှိ ၁ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရ၍ သေဆုံးသွား ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ သတ်ဖြတ်ခံရသူမှာ ကျောက်တော်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအုပ်အောင်မင်းဇော် ဖြစ်ပြီး မြို့လယ်ရှိသာသနာ့ဗိမာန် ရှေ့လမ်းမပေါ်တွင်ရှိနေစဉ် အမည်မသိ လူ ၂ ဦးမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာရောက်ကာ ဓားဖြင့်ထိုးသတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောက်တော်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောသည်။ ၎င်းက “ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဟုတ်တယ်။ သူက CRO (ရဲ မှုခင်းမှတ်ဌာန) ကိုင်တယ်။ သာသနာ့ဗိမာန်ရှေ့ သွားလာနေတုန်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူ ၂ ယောက်က ဓားနဲ့လာထိုး သွားတာလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ဆုံးသွားတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်တွင် ထိုသို့ ရဲအရာရှိ ၁ ဦး လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရသည့်အတွက် မြို့ခံများမှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများဖြစ်ပေါ်ကာ အိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြဘဲ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြရကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကျောက်တော်မြို့ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းက “အဲဒီလို ဖြစ်တယ်လို့တော့ကြားတယ်။ ကျနော့် လည်း မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ လူတွေလည်း တယောက်မှ သွားမကြည့်ရဲကြဘူး။ အားလုံးအိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်မထွက် ရဲကြဘူး။ ဆိုင်တွေလည်း အကုန်ပိတ်ထားကြတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်အား အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် ဧရာဝတီ မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူးကြီး မောင်မောင်စိုးအား ဆက်သွယ် ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရရှိခဲ့ပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာတချို့၌ ယခုကဲ့သို့သောလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်များက ခတ်စိပ်စိပ် ဖြစ်ပွားနေပြီး သတ်ဖြတ်ခံရသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့်အတူ ကျူးလွန်သည့်တရားခံများကို လက်ရှိအချိန်အထိ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အသီးသီး၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ရွာသားများမှာ ယခုကဲ့သို့ ဓားဖြင့်ထိုးကာ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ နေအိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ ခြင်း စသည့်ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများကြား လုံခြုံမှုမရှိခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လျက်ရှိနေသည်။ https://burma.irrawaddy .com/news/2020 /06/14/224576.html
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း မန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဗလဲ့ခပွားတောင်ကိုအမှီပြု၍ မြန်မာရွှေဧကရာဇ် သတ္တု တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကြုံးဝင်သည့် ဓနိကြာစံပြကျေးရွာ တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဒေသခံထောက်ခံ လက်မှတ်များကောက်ခံရာတွင် ရွာသားအများစုလက်မခံကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်များစွာ ကတည်း က ဥယျာဉ်ခြံမြေစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေထိုင်လာကြသည့် ဒေသခံများကို ဓနိကြာအပြင်ရွာနှင့် အတွင်းရွာအကြားရှိ စံပြရွာသစ် တည်ဆောက်မည့် မြေ ၁၂ ဧကအကျယ်ရှိသည့်နေရာသို့ နေအိမ်များရွှေ့ပြောင်းရန် အဆိုပါကုမ္ပဏီက ကြိုးပမ်းအကောင် အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မန်ကျီးကျေးရွာသား နိုင်ဟောင်းစားက “အခုသူတို့ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ဓနိကြာစံပြကျေးရွာဆိုတာက ကျနော်တို့ အတွက်ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး၊ တစ်ခြားဒေသကလူတွေခေါ်လာပြီး ကျနော်တို့လူမျိုးအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်၊ ကုမ္ပဏီ ဘက်က ရင်းနှီြးှမှုပ်နှံရင် ကျနော်တို့ ဒေသခံတွေအတွက်အကျိုးယုတ်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်၊ သူတို့စံပြကျေးရွာဖြစ်လာခဲ့ရင် အုပ်ချုပ် ရေးမှူးတွေက သူတို့လူမျိုးပဲဖြစ်လာမယ်၊ ကျနော်တို့ မူလဒေသခံတွေဟာ အလိုလိုနေရင်း သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက် ရောက်ရှိသွားမှာပါ”ဟု ဆိုသည်။ ထို့အတူ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီလက်ရှိအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ဓနိကြာစံပြ ကျေးရွာ မြေနေရာသည် ရွာသားများပိုင်ဆိုင်သော လက်ရှိခြံမြေနေရာများသာ ဖြစ်နေသည့်အတွက် ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဓနိကြာအပြင်ရွာနေ မိညွန့်စိန်က ပြောသည်။ မိညွန့်စိန်က “တကယ်လို့ဒီနေရာကနေ ကျမတို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ကျမတို့အတွက် ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ကျမတို့မသွားဘူး၊ လက်ရှိကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့ နေရာကလည်း အကောင်းပဲ၊ ကျမတို့အိမ်တွေကလည်း အကောင်းပဲရှိနေသေးတာ ဒီနေရာက ကျမတို့ မိဘတွေထားပေးခဲ့တဲ့ ခြံမြေတွေဖြစ် တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာပဲ ကျမတို့ ဆက်နေသွားမယ်” ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဗလဲ့ခပွားတောင်တဝိုက်တွင် မြန်မာရွှေဧကရာဇ်ကုမ္ပဏီက လယ်ယာမြေများစွာကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားရရှိထားပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဥယျာဉ်ခြံမြေနေရာအချို့ကိုလည်း လမ်းခင်းကျောက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခွင့် ဆက် လက် လျှောက်ထားကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးကြည်စိုးက မွန်သတင်းအေဂျင်စီကို ပြောခဲ့သည်။
NLD အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဗလဲ့ခပွားတောင်၌ ကျောက်မိုင်းထုတ်လုပ်ရန် ဒေသခံများ ကန့်ကွက်နေ သည့်ကြားကပင် မြေဧက ၁၀ဝ ကျော်ခန့်ကို မြန်မာရွှေဧကရာဇ်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီမှ ဝယ်ယူရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် မွန်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်သည့် ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း ယခင်ခေါဇာ မြို့နယ်ခွဲတဝိုက် မိထောလှာကြီးရွာမှ မန်ကျီးကျေးရွာ၊ ဓနိကြာနှင့် မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း နယ်စပ်အဆုံးထိ ဧရိယာကို သဘာဝ အခြေခံခရီးသွားလုပ် ငန်း (Eco Tourism) ဇုန်အဖြစ် မွန် ပြည်နယ်အစိုးရက သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ http://burmese.monnews.org/2020/06/15/%e1%80%9b%e1%80% b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်နှင့် ရခိုင့်တပ်အေအေတို့ တိုက်ပွဲကြောင့် ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးလာသူများ ခိုလှုံ ရန်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း အရေအတွက် (၁၁၁) ခု ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ အစည်းအရုံး (REC) က ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် ၁၀ ခု၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် ၂၀ ခု၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် ၂၇ ခု၊ မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ၉ ခု၊ မြေပုံမြို့နယ်တွင် ၁၈ ခု၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ၂၅ ခု၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ၈ ခု၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် ၂ ခု၊ စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် ၁၈ ခုနှင့် ပေါက်တောတွင် ၄ ခု ဖြစ်ကြောင်း REC က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုစစ်ဘေး ရှောင်စခန်းများအနက် တစ်ချို့စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် လူပေါင်းထောင်ချီထိ နေထိုင်ကြပြီး လက်ရှိ ရခိုင်ပြည် နယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေစုစုပေါင်း နှစ်သိန်းခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တစ်ချို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများကို စာသင် ကျောင်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ဇွန်လ ၁၅ ရက် နောက်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးရမည်ဟုဆိုသော်လည်း ကျောက်တော်မြို့ပေါ်က စာသင်ကျောင်း ခုနှစ်ကျောင်းတွင် ခိုလုံနေသည့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၃၀ဝ၀ ကျော်ကို နေရာပြောင်း ရွှေ့ဖို့ အခက်အခဲ နှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်သန်းစိန်က “ရွှေပြီးရင်ပြန်ထားမယ့်နေရာတွေ လိုအပ်တဲ့ အခါ ဒီကနေ့ နောက်ဆုံးထား လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အခြေအနေက မလွယ်ဘူး။ လက်တွေ့လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေက ခက်ခဲပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ ယင်းအပြင် စစ်ရှောင်အများစုမှာ တဲအိမ်သာသာဆောက်လုပ်ထားသည့် အမိုးအကာအောက်တွင် ဖြစ်သလို နေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီး မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေထိုင်ရေးအပြင် စားဝတ်နေရေးအပိုင်းမှာလည်း အခက်အခဲ တချို့ ရှိနေကြသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များသည် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များတွင် လက်သမား၊ ပန်းရံ စသည့်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖြေရှင်းနေကြကြောင်းပြော သည်။“တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ ပြေးလာရတယ်၊ ပြန်သွားရတယ်ဆိုတော့ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ စစ်ရှောင်တွေ အများစု ကတော့ ရသေ့တောင်မြို့ပေါ်မှာပါပဲ ပန်းရံလုပ်တယ်။ ရတဲအလုပ်တွေကို လုပ်ပြီးတော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီး နေထိုင်ကြတယ်”ဟု ဒေါ်ခင်စောဝေက ပြောသည်။ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အုန်းချောင်းကျေးရွာအနီးတွင် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းကလည်း တပ်မတော်နှင့် ရခိုင့်တပ်အေအေတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အနီးအနားရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၀ ရွာကျော် က ကျေးရွာသားအများအပြား ဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ http://www.mizzi maburmese.com/article/70710
မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့၏ လက်ရှိကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများဖြစ်သည့် စောအောင်မြင့်ခိုင် နှင့် နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးတို့သည့် အဆိုပါ နေရာများအတွက် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြန်အရွေးခံတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ကေအိုင်စီသို့ ဇွန် ၁၅ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြောကြားသည်။ “ ကျမ ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ ကရင်ရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက် လျှောက်လွှာပြန်မတင် ဖြစ်ဘူး”ဟု ဝန်ကြီး နော် ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ပြောသည်။ သူမသည် လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွင် ကရင့်ရေးရာအပြင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးနှင့် ပြန်ကြားရေး ဌာနတို့ကိုလည်း တာဝန်ယူထားသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ မွန်ပြည်နယ် ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင်သည်လည်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာကို ပြန်အရွေးခံတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ကေအိုင်စီသို့ ယခုလို ပြောသည်။ “ အဓိက ကတော့ ကိုယ်ဘာလုပ် ပေး နိုင်လဲ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ကိုယ်ဘယ်နေရာနဲ့ သင့်တော်လဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ ပါတီက တာဝန် ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အခြားနေရာမှာ ပြန်တာဝန်ထမ်းဆောင် သွားဖို့တော့ ရှိပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင်က ပြော သည်။
ယခုလို ဝန်ကြီး စောအောင်မြင့်ခိုင် ရေးရာနေရာ ပြန်မဝင်တော့သည့်အတွက် မွန်ပြည်နယ် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာကို ပေါင်မြို့နယ်သား ဒေါက်တာ စောသာစိန်က အဆိုပြုလွှာတင်ထားသည်ဟု မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကရင် အသိုင်းအဝိုင်းကဆိုသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး နေရာကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အမျိုးသမီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဝင်ပြိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု သတင်းပေါ်ထွက်နေသော်လည်း ကေအိုင်စီက သီးခြားအတည်ပြုချက်မရရှိဖြစ်နေသည်။ လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်ပြင်ပ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီ၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ကရင်တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီး ၅ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် NLD ပါတီဝင်များ ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80% 9b%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%
သျှမ်းပြည်နယ်တွင်းရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သျှမ်းပြည်တွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ၄ သောင်းကျော် ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ဖေဖော်ဝါရီ မှ စပြီး ဇွန် လ ထိ သျှမ်းပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ဂိတ်မှာ တဆင့် ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း (၄၂၉ ၉ ၅) ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။“သျှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ Facility Quarantine (၅၁၇) နေရာ ပြုလုပ်ထားတယ်” ဟု လူမှုရေးဝန်ြကီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
ထို မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် မူဆယ် ရွှေနန်းတော်ဂိတ်၊ လောက်ကိုင် ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်၊ တာချီလိတ် တံတားအမှတ် (၂) နှင့် မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ် တွေမှာ အသီးသီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြသည်။ မူဆယ်ဂိတ်၊ လောက်ကိုင် ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်မှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအများစုသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း တို့ အများစုဖြစ်ကြသည်။
“တခြားတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်က သူတွေဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ သျှမ်းမြောက်ဆိုရင်ကား နဲ့ လားရှိုး ကို ပို့တယ်။ လားရှိုးကနေတဆင့် ရထားနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ကို ပြန်ပို့ပေးတယ်”ဟု ဒေါက်တာမျိုးထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ သျှမ်းပြည်တွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ (၄၀ဝ၀ဝ) ကျော်သည် Quarantine ပြည့်ပြီး ပြန်သွားသူ ( ၃၀ဝ၀ဝ) ကျော်ရှိပြီး လက်ရှိချိန်ထိ Home Quarantine (၅၀ဝ၀) ကျော် နှင့် Facility Quarantine ( ၁၀ဝ၀) ကျော် ကျန်ရှိထားကြောင်း သိရ သည်။ https://burmese. shannews.org/archives/17082
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဆိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်သော ထိုင်းပြည်တော်ပြန် ၇၀၀ ကျော်အနက် ပထမဆုံးအကြိမ် ၄၄ ယောက်ကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ တစ်ဦးမျှပိုးမတွေ့ရသေးကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ မေလ ကုန်ပိုင်းကစပြီး ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရက ထိုင်းပြည်တော်ပြန်များကို စတင်လက်ခံခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် စုစုပေါင်း ၇၂၆ ဦး ရှိနေ ပြီဖြစ်သည်။
“ထိုင်းကပြန်လာတဲ့သူတွေကို ဟိုမှာလည်းစစ်ခဲ့တာပေါ့။ ပြီးမှ ဒီကိုပို့တယ်။ ဒီမှာလည်းရောက်တော့လည်း ၂၁ ရက် ကွာရန်တင်း ထားတယ်။ ပြီးမှ ဆေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာပေါ့။ အဲ့ထဲမှာ အခု ပထမ စစ်တဲ့ထဲမှာ ၄၄ရောက်က ပိုးမတွေ့ ရဘူးပေါ့လေ” ဟု ပြည်နယ် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီမှ ဒုညွန်ကြားရေးမှူး ဦးတင့်နိုင် က ပြောသည်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်လည်း ထိုင်းပြည်တော်ပြန် ၁၄၃ ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဟု သူက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့အတွင်း ထိုင်းပြည်တော်ပြန်များကို ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်း၊ သားဖွားသင်တန်းကျောင်းနှင့် ဟိန္ဒူဘုရား ကျောင်း စသောနေရာတွင်ထားရှိပြီး စုစုပေါင်း၂၅၄ဦးခန့်ရှိကြောင်း မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းဝင်း ထံမှ သိရသည်။ ကျန်ရှိသူများကို ၎င်းတို့သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်အလိုက် ကွာရန်တင်းထားရှိနေကြောင်း သိရသည်။ https://b urmese.kachinnews.com/2020/0 6/12/return-from-thailand/
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့တွင် Facility Quarantine ဝင်ထားသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၂၀ဝ) ကျော် ၏ ဓါတ်ခွဲနမူနာ အားလုံး Negative ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ အနီးတစ်ဝိုက်မှာ Facility Quarantine (၁၀) ခု ထားရှိပြီး Facility Quarantine ၂ နေရာမှာ ဓါတ်ခွဲ နမူနာ အားလုံး Negative ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“တောင်ကြီး ကွန်ဗျူတာ တက္ကသိုလ်နဲ့ ကမ္ဘောဇ ဿသနာ့ ဗိမာန် မှာ facility quarantine ဝင်ထားတဲ့သူ ဓါတ်ခွဲအဖြေတွေ အားလုံး Negative ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့မှ သိရပါတယ်”ဟု Facility Quarantine တွင် ဝင်ရောက် ကူညီပေးနေ သည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကိုဝင်းနိုင်စိုး ကသျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ ကွန်ဗျူတာ တက္ကသိုလ်တွင် Facility Quarantine ဝင်ထားသည့် သူ (၁၅၅) ဦး နှင့် ကမ္ဘောဇ ဿသနာ့ ဗိမာန် မှာ (၁၃၄) ဦး တို့၏ ဓါတ်ခွဲအဖြေအားလုံး Negative ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို Facility Quarantine ဝင်သူ ၂၀ဝ ကျော်သည့် ယနေ့ ကားစီစဉ်ပေးကာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် များပြန်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုဝင်းနိုင်စိုး က ပြောသည်။“၂၅ ရက်နေ့ထိ နောက်ထပ် ဝင်ရောက်လာဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အားလုံးက မြဝတီ ဘက်က ဝင်လာမယ့်သူတွေပဲ” ဟု ကိုဝင်းနိုင်စိုး ကပြောသည်။
အဆိုပါ နေရပ်ပြန်များသည် တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် Facility Quarantine စခန်း ၁၀ ခုတွင် အသီး သီးရောက်ရှိပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့တွင် ဓါတ်ခွဲနမူနာ စတင်စစ်ဆေးကြောင်း သျှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17108
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသမလုံခြုံမှုကြောင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ တာဝန်က နုတ်ထွက်နေသလို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ တွေကို ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးလို့ ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေလည်းရှိတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဒုဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၅၈ ဦး နုတ်ထွက် ခဲ့ပြီး သူတို့နေရာကို ပြန်လည်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိမိဆန္ဒသဘော အလျောက် နုတ်ထွက်သူတွေရှိသလို ဖမ်းဆီးအရေးယူခံထားရသူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဒုဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်က ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
“အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း အထိတောင်ခံရတယ်။ အဲဒါ ကြောင့်လည်း တချို့ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက မလုပ်လိုဘူးဆိုပြီး ထွက်ကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ တချို့ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျတော့လည်း ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းပါဆိုပြီး ကြေညာထားတဲ့အဖွဲ့ကို ရိက္ခာတွေပို့တယ်။ ငွေကြေးတွေ ထောက်ပံ့တယ်။ ဒါတွေဟာဖြစ်လာတော့ကြေညာပြီး ဥပဒေအရပြောပြီးတဲ့နောက် ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကို တပ်မတော်ကနေပြီးတော့မှ ဒါတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ ပြီးရင် ရဲတပ်ဖွဲ့ အပ်နှံပြီးတော့ အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ပေါ့ အရေးယူ ဖို့ရာဆိုပြီး လုပ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရသော်လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ ဒီအပေါ်မှာ ဥပဒေနဲ့အညီပဲ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလို နုတ်ထွက်သွားတဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနေရာမှာ အစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေသလို နုတ်ထွက်သွားသူ တွေက ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုပါကလည်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်သန်းက ပြောပါတယ်။
“အခုထွက်တယ်ဆိုတာ ကလည်း နယ်မြေဒေသ မလုံခြုံလို့၊ မအေးချမ်းလို့ ထွက်ရတာပါ။ သူ့စိတ်ဆန္ဒမူရင်းအရတော့ ထွက်ချင်လို့ထွက်တာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုလိုမျိုး မအေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာ ထွက်ကောင်းထွက်ပေမယ့် ဒေသလုံခြုံတယ်ဆိုရင် ရပ်ရွာအကျိုး အတွက် ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့စိတ် အပြည့်ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ အခုလိုမျိုး မလုံခြုံလို့ထွက်တဲ့အပေါ်မှာ လည်း ကျနော်တို့ ဌာနအနေနဲ့ အပြစ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင် မယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်မရွေး ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် စီမံဆောင် ရွက်ပေးဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်”လို့ အစိုးရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ နယ်မြေဒေသ မလုံခြုံမှုကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ နုတ်ထွက်နေပေမဲ့ အချိန်မီ ပြန်လည်ခန့်အပ် နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးနေရာမှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဝင်လာဖို့အထိ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/394366
ရှမ်းပြည်နယ် မဘိမ်းမြို့နယ်မှာ ငွေကျပ်သိန်း ၁၄,ဝ၀ဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာ မဘိမ်းမြို့နယ်၊ ခတ်ခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ခတ်ခုံကျေးရွာ-မိုမင်တန်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးသွားလမ်း၊ သစ်ဖွဲ့ပင်ပြန့်ဆင်စခန်းရှိ အောင်ကျော်ကျော်ရဲ့ နေအိမ်တဲကို ရှာဖွေ ရာ ထွန်းကြိုင်အား အတူတွေ့ရှိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နေအိမ်တဲထဲကနေ ကျပ်သိန်း ၁၄,၂၂၀ တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၇၁၁,ဝဝဝ ပြား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး အောင်ကျော် ကျော် နဲ့ ထွန်းကြိုင် တို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/394125
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ကျေးပင်ကြီးရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ(၂)မှ ငွေလုယက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သံသယဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံထားသူတစ်ဦးကို မြို့နယ်တရားရုံး၌ ချုပ်ရမန်ယူထားကြောင်း မိသားစုထံမှ သိရသည်။ ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့၊ ညနေ ၄ နာရီ ကျော်ခန့်က KBZ ဘဏ်ခွဲ(၂)ကို အမည်မသိမျက်နှာဖုံးစွပ် လူ(၄)ဦးက Hi Jet အဖြူရောင်ကားတစ်စီးဖြင့် လာရောက်ကာ ငွေများကိုလုယူခဲ့သဖြင့် ငွေကျပ်သိန်း ၁၈၀ဝ ကျော်ပါသွားခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စ တွင် ကျူးလွန်သူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာတွင် သံသယရှိသူတစ်ဦးကို မော်တော်ယဉ်နှင့်အတူ ဖမ်းမိခဲ့ပြီး ကျန် ၃ ဦးမှာ ဘဏ်မှငွေများနှင့်အတူ ထွက်ပြေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရသူမှာ စစ်တွေမြို့၊ ကုန်းတန်းရပ်ကွက်မှ ကားအငှားမောင်းသူ စိုးမင်းထွန်းဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဇွန်လ(၁၁)ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံး၌ ချုပ်ရမန်ယူခဲ့ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက DMG သို့ ပြောသည်။ “သူ့ကို ရမန်ယူထားတယ်။ ၂၅ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းထားပါတယ်။ သူနဲ့ကျမတို့ တွေ့ခွင့်မရသေးပါဘူး။ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ ထမင်းပိုရင်လည်း စခန်းအဝမှာ ထားခဲ့ရတယ်။ သူ့ဆီက စကားတွေကို ဘာမှမကြားရသေးဘူး။ ရမန် ယူတုန်းကလည်း သူနဲ့စကားမပြောလိုက်ရပါ ”ဟု ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက ဆိုသည်။ အခင်းဖြစ်သည့်နေ့က ကိုစိုးမင်းထွန်းမှာ ကားမောင်းရန်ထွက်သွားပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံရသည်ဆိုသည့် သတင်းကိုသာ မိသားစုဝင်များက သိရှိထားပြီး မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်ကို ကာယကံရှင်နှင့် မတွေ့ရသေးသဖြင့် သိရှိခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဆိုသည်။
DMG မှ စစ်တွေအမှတ်(၁)ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်ပြီး စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးအောင်မြဦးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော် လည်း မအားသေးဟုသာ တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရုံးများတည်ရှိရာ စစ်တွေမြို့တွင် ယခုကဲ့သို့ ဘဏ်မှငွေလုယူမှုများ ဖြစ်ပွားလာသည့်အပေါ် မြို့သူမြို့သားများက စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြသည်။“ဒီစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာတောင် ဓားထိုးမှုတွေ၊ လုယက်မှုတွေ ဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်။ အန်တီတို့အနေနဲ့ ဘာမှလုံခြုံမှုမရှိဘူး၊ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဒေသခံတွေအကုန်လုံး စိုးရိမ်နေကြတယ်” ဟု စစ်တွေမြို့ခံ ဒေါ်ဖြူဖြူသန်းက ဆိုသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73479
၁။ တပျရငျးမှူးတဈဦးကို စဈဆေးရနျ စလှေတျပေးရေး DKBA ထံ ပွညျနယျ နယျလုံဝနျကွီးအကွောငျးကွား
၂။ အငွငျးပှားမွမှော တပျ ဝငျရောကျထှနျယကျမှုကို တောငျသူတှေ ကနျ့ကှကျ
၃။ ရသတေ့ောငျ၊အုနျးခြောငျးတှငျ AA နှငျ့တပျမတျော တိုကျပှဲပွငျးထနျ၊ ကြေးရှာသားထောငျနှငျ့ခြီထှကျပွေးတိမျးရှောငျ
၄။ KNU တပျမဟာ ၅ နှငျ့ တပျမတျောတို့ ၂ လအတှငျး တိုကျပှဲ ၈၈ ကွိမျဖွဈဟုဆို
၅။ ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ ဒသေကွီး ၄ ခု ၌ ဝငျပွိုငျမညျ ဟု CNLD ပါတီ ပွော
၆။ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှငျ တဈဆို့မှုဖွဈစသေောကိစ်စမြားအား ကြျောလှားနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြားကို ရှာဖှနေဟေု NCA အကောငျအထညျ ဖျောမှုဆိုငျရာ မူဘောငျညှိနှိုငျးရေးအဖှဲ့ ညှိနှိုငျရေးမှူး ပွောကွား
၇။ မွောကျပိုငျး ၄ ဖှဲ့ကို တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ အစိုးရဖိတျကွား
၈။ ဂှမွို့နယျတှငျ ALP/ALA တပျဖှဲ့ဝငျ ၃ ဦးကို ပုဒျမ ၆ ခုဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထား
၉။ ရှမျးမွောကျပိုငျးနှငျ့ ကခငျြပွညျနယျရှိ စဈဘေးရှောငျဒုက်ခသညျမြား ကိုဗဈကာလ စားဝတျနရေေး အလှနျခကျခဲနေ
၁၀။ မငျးတပျတှငျ ပွညျပပွနျ Quarantine ဝငျရသူမြား ကိုယျ့စရိတျနှငျ့ကိုယျ နရေဟုဆို
၁၁။ ရသတေ့ောငျ ဒုံးပိုကျ နယျခွားစောငျ့ရဲကို AA ဝငျတိုကျ
၁၂။ လှိုငျကျောမွို့နယျ ဒေါလိုရှေးရှာအနီး လြှပျစဈတာဝါတိုငျ အောကျခွတှေငျ မွမွှေုပျမိုငျး နှဈလုံး တှရှေိ့
၁၃။ ရှညေောငျမွို့ Quarantine Center တှငျ ထိုငျးမှပွနျလာသူ အမြိုးသမီး ၁ ဦးသဆေုံး
၁၄။ KIO ၏ COVID-19 ကျောမတီက အခွားရောဂါကာကှယျရေးမြား တိုးခြဲ့ ဆောငျရှကျရနျ ဆုံးဖွတျ
၁၅။ ကြောကျတျောမွို့လယျ၌ ရဲအရာရှိ ၁ ဦး သတျခံရ၍ သဆေုံး
၁၆။ ရေးတောငျပိုငျး ဓနိကွာစံပွကြေးရှာ တညျဆောကျရေး ရှာသားအမြားစုလကျမခံ
၁၇။ ရခိုငျတိုကျပှဲကွောငျ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျး ၁၀ဝ ကြျော ရှိလာ
၁၈။ ရနျကုနျနှငျ့ မှနျကရငျဝနျကွီးနှဈဦး ရေးရာနရောအတှကျ ပွနျလြှောကျထားခွငျးမရှိ
၁၉။ သြှမျးပွညျတှငျး နရေပျပွနျ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား ၄ သောငျးကြျောရှိ
၂၀။ ထိုငျးပွညျတျောပွနျ ၇၀ဝ ကြျောအနကျ ၄၄ ဦးကိုစဈဆေးရာ ပိုးမတှေ့
၂၁။ တောငျကွီးရောကျ ထိုငျးနရေပျပွနျ ၂၀ဝ ဓာတျခှဲ အဖွေ Negative ဖွဈ
၂၂။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ဒသေမလုံခွုံမှုကွောငျ့ အုပျခြုပျရေးမှူးမြား နုတျထှကျနဟေု ဒုဝနျကွီးပွော
၂၃။ မဘိမျးမွို့နယျတှငျ ငှကေပျြသိနျး ၁၄,ဝဝဝ ကြျော တနျဖိုးရှိ စိတျကွှ ဆေးမြား ဖမျးမိ
၂၄။ စဈတှဘေဏျမှ ငှလေုယကျမှုတှငျ သံသယဖွငျ့ ဖမျးဆီးထားသူတဈဦးကို ခြုပျရမနျယူစဈဆေးနေ
မူးယဈဆေးဝါး သယျဆောငျရောငျးဝယျမှုနှငျ့ပတျသကျမှုရှိနသေညျဆိုကာ ဒီမိုကရစေီအကြိုးပွုကရငျ တပျမတျော -DKBA မှ တပျရငျးမှူးအဆငျ့ရှိသူ စောအဝေမျးကို စဈဆေးနိုငျရေးအတှကျ စလှေတျပေးရနျ ကရငျပွညျနယျလုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မြိုးမငျးနောငျက KKO (DKBA)ထံ အကွောငျးကွား စာပေးပို့ထားသညျဟု သိရသညျ။
ရှမျးပွညျနယျအတှငျး ဖမျးဆီးရမိသညျ့ မူးယဈဆေးဝါး သယျဆောငျရောငျးဝယျမှုတဈခုနှငျ့ ပတျသကျမှုရှိကွောငျး စဈဆေး တှရှေိ့၍ တရားဥပဒနှေငျ့အညီ စဈဆေးနိုငျရေးအတှကျ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ထံ အမွနျစလှေတျပေးရနျ ကရငျပွညျနယျဝနျကွီး ခြုပျ(ကိုယျစား) နယျလုံဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မြိုးမငျးနောငျမှ ဇှနျလ ၈ ရကျနေ့ ရကျစှဲနှငျ့ DKBA ဖားအံ ဆကျဆံရေးရုံးသို့ အကွောငျးကွားစာ ပေးပို့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ မလေ ၂၄ ရကျနတှေ့ငျ လှိုငျလငျ၊ တောငျကွီးကားလမျး၊ ဟိုတငျ့ကြေးရှာအနီးတှငျ ICE (၁၆၁၅) ကီလိုနှငျ့ သယျ ဆောငျသူနှဈဦးကို ဖမျးဆီးရမိပွီး စဈဆေးခကျြမြားအရ ၎င်းငျးမူး ယဈဆေးဝါးမြားမှာ DKBA ( ၉၀၃) တပျရငျးမှ တပျရငျးမှူး အဆငျ့ရှိသညျ့ စောအဝေမျးနှငျ့ ပတျသကျမှုရှိကွောငျး ကရငျပွညျနယျနယျလုံဝနျကွီး ပေးပို့သညျ့ အကွောငျးကွားစာတှငျ ထိုသို့ ဖျောပွထားသညျ။ အဆိုပါအကွောငျးကွားစာနှငျ့ပတျသကျပွီး ဒီမိုကရစေီအကြိုးပွု ကရငျတပျမတျော -DKBA စဈဦးစီး ခြုပျနှငျ့ ဌာနခြုပျရုံးသို့ ပေးပို့အကွောငျးကွားထားပွီးဖွဈကွောငျး DKBA ဖားအံဆကျဆံရေးရုံးမှ ပွောဆိုသညျ့အတှကျ စဈဦးစီးခြုပျ – ဗိုလျခြုပျကွီး စောမိုရှေးကို ကအေိုငျစီမှ ဖုနျးနှငျ့ဆကျသှယျသျောလညျး ဖုနျးဆကျသှယျမှုမ ရရှိခဲ့ပေ။
ထို့အပွငျ DKBA ဒုစဈဦးစီးခြုပျ ဒုဗိုလျခြုပျကွီး စောစတီးထံ ကအေိုငျစီမှ ယနဇှေ့နျလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ ဆကျသှယျရာ အဆိုပါ အကွောငျးကွားစာမှာ ဌာနခြုပျတှငျ မရောကျရှိသေးသညျ့အတှကျ မိမိအနဖွေငျ့ မသိရှိရသေးကွောငျးသာ ကအေိုငျစီသို့ ပွနျ လညျပွောဆိုသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%9b %e 1%80%84%e1%
မွယောပိုငျဆိုငျမှု အငွငျးပှားနတေဲ့ ကယားပွညျနယျ၊ ဒီမောဆိုမွို့နယျ ဒေါဆိုရှကြေ့ေးရှာက တောငျယာတှထေဲမှာ တပျမတျောက ဝငျရောကျထှနျယကျနတေဲ့အပျေါ တောငျသူတှကေကနျ့ကှကျလိုကျပါတယျ။ အမှတျ ၃၆၀ အမွောကျတပျနဲ့ မွယောပိုငျဆိုငျမှု အငွငျးပှားနတေဲ့ ဒေါဆိုရှကြေ့ေးရှာကတောငျယာတှထေဲမှာ ဒီရကျပိုငျးအတှငျး တပျကဝငျရောကျ ထှနျယကျ သှားတာဟာ တရားမြှတမှု မရှိဘူးလို့ တောငျသူတှကေ ပွောကွပါတယျ။
ဒေါဆိုရှတေ့ောငျသူ ခှနျးသောမတျဈ က တောငျသူတှကေိုတော့ ယာထဲ မဝငျဖို့ပွောပွီး၊ တပျက ဝငျရောကျထှနျယကျသှား တယျလို့ ပွောပါတယျ။ “သူတို့အခု လာလုပျသှားတာ ၃ ရကျလား ၄ ရကျလောကျရှိပွီ၊ ကနြျောတို့ကိုကတြော့ မဝငျသေးနဲ့ အုံးလို့ ပွောပွီးတော့မှ အခုက သူတို့တပျဖကျကနေ ကနြျောတို့တောငျယာကို လာထှနျထယျသှားတဲ့ကိစ်စက ကနြျောတို့ အတှကျ မတရားပါဘူး။” ၂၀ဝ၂ ခုနှဈလောကျကတညျးက ဒေါဆိုရှရှေ့ာထဲက ယာမွေ ဧက ၂၀ဝ ကို အမှတျ ၃၆၀ အမွောကျတပျက သိမျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီယာတှဟော ဘိုးဘှားစဉျဆကျ လုပျကိုငျစားသောကျခဲ့ကွတဲ့ မွတှေဖွေဈတယျလို့ တောငျသူတှကေ ပွောပါတယျ။ လုပျကိုငျစားသောကျစရာ မွနေရော မရှိတဲ့အတှကျ မိသားစုစားဝတျနရေေးကို စိတျပူပနျရပွီး နစေ့ဉျနဲ့အမြှ စိတျဆငျးရဲနရေ တယျလို့ ဒေါဆိုရှတေ့ောငျသူတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒျေါညားမာ က ပွောပါတယျ။
ဒျေါညားမာက တောငျယာမွေ ဧက ၂၀ ဝနျးကငျြ သိမျးယူခံရပွီး လကျရှိမှာတော့ စိုကျပြိုးစားသောကျစရာ မွနေရောမရှိ တော့လို့ ဆောကျနဆေဲ တိုကျပုအိမျကလေးကိုလညျး မဆောကျနိုငျတော့ဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ ဒေါဆိုရှကြေ့ေးရှာက တောငျသူတှဟော သိမျးဆညျးခံထားရတဲ့ တောငျယာအပွငျ တခွားလုပျကိုငျစားသောကျစရာ နရောမရှိတဲ့အတှကျ ပွနျပေးဖို့ မွသေိမျးခံရတဲ့ ခှနျးသောမတျဈ က တောငျးဆိုပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ကယားပွညျနယျအစိုးရ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မွငျ့ဝေ ကို ဇှနျလ ၁၀ ရကျ နကေ့ လှတျတျောအစညျးအဝေးအပွီး မေးမွနျးရာမှာတော့ သူ့အနနေဲ့ မသိကွောငျး ပွနျလညျဖွကွေားပါတယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ စိုကျပြိုးရာသီခြိနျမှာ ဒေါဆိုရှေးတောငျသူတှဟော အဲဒီတောငျယာမွတှေထေဲကို ဝငျရောကျထှနျယကျ စိုကျပြိုး ရာကနေ တပျပိုငျမွထေဲ ဝငျရောကျကြူးကြျော စိုကျပြိုးတယျဆိုပွီး ဒျေါညားမာ အပါအဝငျ တောငျသူ ၁၉ ယောကျကို အမှတျ ၃၆၀ အမွောကျတပျက ပွညျသူပိုငျ ပစ်စညျးကာကှယျရေးဥပဒေ ပုဒျမ ၆/၁၊ ပိုငျနကျ ကြူးကြျော မှုတှနေဲ့ တရားစှဲဆိုခဲ့ပါတယျ။ တရားစှဲခံရသူတှထေဲက တောငျသူထကျဝကျခနျ့က ရှဈလခနျ့ အခြုပျကခြဲ့ပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈ မတျလ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ ထောငျ ဒဏျ ၁၅ ရကျ သို့မဟုတျ ငှဒေဏျ တဈသောငျးနဲ့ စီရငျခကျြ ခမြှတျခံရလို့ ငှဒေဏျပေးဆောငျကာ ပွနျလညျလှတျ မွာကျလာ ခဲ့ကွသူတှဖွေဈပါတယျ။ တောငျသူတှကေ သူတို့မွယောတှမှော ပွနျလညျစိုကျပြိုးထှနျယကျနိုငျဖို့ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျး တှနေဲ့ ပူးပေါငျးကွိုးစားသှားမယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/demoso-disputed-land-06132020032529.html
၃။ ရသတေ့ောငျ၊ အုနျးခြောငျးတှငျ AA နှငျ့တပျမတျော တိုကျပှဲပွငျးထနျ၊ ကြေးရှာသား ထောငျနှငျ့ခြီထှကျပွေးတိမျးရှောငျ
ရခိုငျပွညျနယျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျနှငျ့ ၁၃ မိုငျခနျ့ကှာဝေးသောအုနျးခြောငျးကြေးရှာတောငျဖကျ၊ သမီးလှကြေးရှာအနားတှငျ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျောအအေတေို့ ဇှနျလ ၁၄ ရကျနေ့ တိုကျပှဲပွငျးထနျစှာဖွဈပှားခဲ့မှုကွောငျ့ ကြေးရှာ ၁၀ ရှာခနျ့မှ ဒသေခံ ထောငျခြီ၍ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနကွေရကွောငျး ဒသေခံမြားနှငျ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားက ရနျကုနျ ခတျေသဈသတငျးဌာနသို့ ပွောသညျ။ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျက “တိုကျပှဲ ဖွဈတာကတော့ မနေ့ ညနေ ၄ နာရီလောကျကဖွဈတယျ။ ညနေ ၅ နာရီကြျောကြျော လောကျမှာ နှဈဖကျပဈခတျမှု တှရေပျသှားတယျ။ နှဈဖကျစလုံးက လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ပဈခတျတာတှရှေိတယျ။ ပဈခတျမှုတှကေ မနေ့ ည ၇ နာရီလောကျ အထိရှိနတေယျ”ဟု ရနျကုနျခတျေသဈသတငျးဌာနသို့ပွောသညျ။
တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုကွောငျ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊အုပျခြောငျးကြေးရှာ၊သမီးလှကြေးရှာသဈ၊ သမီးလှကြေးရှာဟောငျး၊ ကုနျတနျး၊ အိုးဖောကျ၊ ဈီးခေါငျး၊ မညှငျးတောငျ၊ သပွဆေိပျ၊ ဇယြောမွိုငျ ကြေးရှာမြားမှ ဒသေခံထောငျခြီ၍ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ သကေံကြေးရှာနှငျ့ ခှဆုံကြေးရှာမြားသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေကွောငျး သိရှိရသညျ။ အုနျးခြောငျးကြေးရှာသား တဈဦး က”ရှာနားကို တပျမတျောစဈကွောငျးရောကျနတော တဈပတျလောကျရှိပွီ။ အခုနှဈဖကျ တိုကျပှဲဖွဈကွတာ။ မနကေ့ စပွီး တော့ တိုကျပှဲဖွဈကွတယျ။ အုနျးခြောငျးကြေးရှာမှာ လယျထှနျတဲ့ လယျသမားတှကေိုပဈခတျ တာတှလေုပျတယျ။ ထိခိုကျ ဒဏျရာရတာတော့မရှိဘူး။ ကနြျောတို့ ရှာအပါအဝငျ ကြေးရှာတျောတျောမြားမြား တိုကျပှဲဖွဈလို့ အကုနျထှကျပွေးကွတယျ” ဟုပွောသညျ။
တိုကျပှဲမြားဖွဈပှားနောကျ တပျမတျောစဈကွောငျးမြားက ကြေးရှာမြားသို့ ဝငျရောကျစဈဆေးမှုမြား လုပျဆောငျလရှေိ့သဖွငျ့ ကြေးရှာသားမြား ကွောကျလနျ့၍ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျကွပွီး တိုကျပှဲကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိမညျကို စိုးရိမျ၍ ထှကျပွေး ကွသူမြားလညျး မြားပွားကွောငျးသိရှိရသညျ။ တိုကျပှဲကွောငျ့ လကျရှိအခြိနျတှငျ အရပျသားမြား ထိခိုကျဒဏျရာရရှိသညျဆို သော သတငျးမြားမကွားရသေးကွောငျး ဒသေခံမြားကပွောဆိုသညျ။ ယမနျနေ့ တိုကျပှဲဖွဈခြိနျနှငျ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားပွီး နောကျ ပိုငျး ရစေိုးခြောငျးဗြူဟာနှငျ့ မယေုမွဈထဲရတေပျမြားက လကျနကျကွီးမြားဖွငျ့ ပဈကူပေးမှုမြားရှိသညျဟု ဒသေခံမြားနှငျ့ လှတျတျောကိုယျစား လှယျမြားထံမှ သိရှိရသညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/ 06/%e1%80%9b%e1%80 %9e%e1 %80%b1%e1%80%b7%e1%80
ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး (KNU) တပျမဟာ (၅) နှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောတို့အကွား ဧပွီလ ၁ ရကျမှ ဇှနျလ ၃ ရကျအထိ ထိတှတေို့ကျပှဲ ပေါငျး (၈၈) ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး KNU စညျးရုံးရေးနှငျ့ ပွနျကွားရေးဌာန၏ သတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေးဌာနခှဲ ထံမှ သိရသညျ။ ထိတှေ့ တိုကျပှဲမြားအတှငျး KNU တပျမဟာ (၅)ဘကျက ထောငျထားသော မိုငျး ၁၃ လုံးကို တပျမတျောစဈ သညျမြားနငျးမိခဲ့၍ စဈသညျ ၃၀ ကဆြုံးကာ ၃ ဦးဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး KNU သတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေးဌာနခှဲကဆိုသညျ။
မွနျမာတပျမတျောသညျ သတျမှတျနယျမွမြေားကို ကြျောလှနျ၍ လှုပျရှားသှားလာခွငျး နှငျ့ တပျစခနျးမြား လာရောကျခထြား ခွငျးကွောငျ့ KNU ၏ မူတွျောခရိုငျရှိ တပျမဟာ (၅) ၏ နယျမွကောကှယျစောငျ့ရှောကျရေးတပျမြားနှငျ့ ထိတှကေ့ာ ပဈခတျမှု မြား ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး KNU သတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေးဌာနခှဲ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။ ထိတှေ့ ပဈခတျတိုကျမှုမြားကွောငျ့ တပျမတျောသညျ လကျနကျကွီးပဈခတျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ပွီး တပျမတျော၏ လကျနကျကွီးကွောငျ့ ရှာသား ၃ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရမှုမြားရှိခဲ့ပွီး၊ ရှာ ၄ ရှာမှ အရပျသား ၅၇၂ ဦး ထှကျပွေးတိမျရှောငျရကွောငျး KNU ၏ ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ တိုကျပှဲဖွဈပှားမှု အခွအေနေ အသေးစိတျမေးမွနျးရနျ KNU တပျမဟာ (၅) ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး စောကလယျဒိုးထံ ဧရာဝတီက ဖုနျးဖွငျ့ဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး အဆကျအသှယျမရခဲ့ပေ။ တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့ကမူ ဧပွီလ ၁ ရကျမှ ဇှနျလ ၃ ရကျအထိ ကရငျပွညျနယျ ဖာပှနျမွို့နယျနှငျ့ ပဲခူးတိုငျး ကြောကျကွီးမွို့နယျ တို့တှငျ တပျမတျောနှငျ့ KNU တပျမဟာ (၅) တို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့သညျမှာ မှနျကနျကွောငျး အတညျပွုသညျ။
“အဓိက ဖွဈပှားတဲ့ ပုံစံကတော့ တပျစခနျးတှကေို လာရောကျခြောငျးမွောငျးပဈခတျတဲ့ ဟာမြိုးတှေ မြားတယျ။ လမျးမပျေါ မိုငျးထောငျမိုငျးဆှဲ တိုကျခိုကျမှု ဖွဈတာမြားပါတယျ။ အကွိမျရကေတော့ ၈၈ ကွိမျမဟုတျပါဘူး။ နစေ့ဉျရကျဆကျ တိုကျပှဲ ဖွဈနတောလညျး မရှိပါဘူး”ဟု တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ရှငျးပွသညျ။ KNU တပျမဟာ ၅ မှလညျး ၎င်းငျးတို့၏ တပျရငျး ၁၀၂ လကျအောကျခံ တပျခှဲ (၃) နှငျ့ တပျခှဲ (၄) တို့သညျ ပွီးခဲ့ သညျ့ မလေ ၃၀ ရကျတှငျ မထောရှာအနီး တပျစှဲထားသော တပျမတျောတပျစခနျးတခုကို ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့ကွောငျး ကွညောထားသညျ။
KNU အဖှဲ့သညျ အစိုးရနှငျ့ တနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) ကို လကျမှတျရေးထိုးထား သညျ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ဖွဈပွီး လကျရှိတှငျအစိုးရနှငျ့လကျတှဲကာ ဗိုငျးရပျဈကာကှယျရေးဆောငျရှကျနသေညျ့ အဖှဲ့အစညျး ဖွဈသညျ။ သို့သျော ပွီးခဲ့သညျ့ မလေအတှငျးက မှနျပွညျနယျ၊ သထုံခရိုငျရှိ ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး (KNU) ၏ တပျမဟာ (၁) ဖှငျ့ထားသညျ့ COVID– 19 စဈဆေးရေးဂိတျ အပါအဝငျ ဖာပှနျခရိုငျ ဒှဲလုံမွို့ရှိ စဈဆေးရေးဂိတျမြားနှငျ့ ပတျ သကျ၍လညျးကောငျး သံတောငျကွီးနှငျ့ဖာပှနျမွို့နယျတို့တှငျ လမျးဖောကျလုပျနသေညျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ လညျးကောငျး တပျမတျောနှငျ့ KNU ကွား စဈရေးတငျးမာမှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/13/2
ခငျြးတိုငျးရငျးသားပါတီ ၃ ခု ပေါငျးစညျးထားသညျ့ ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (CNLD) ပါတီအနဖွေငျ့ ခငျြးပွညျနယျ ရှိ မဲဆန်ဒနယျ အားလုံးအပွငျ စဈကိုငျး၊ မကှေးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတို့ရှိ ခငျြးလူမြိုးမြား နထေိုငျရာ ဒသေမြားတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ CNLD ပါတီ ပူးတှဲ ဥက်ကဋ်ဌ ပူးနိုထနျကပျက“ကနြျောတို့ကတော့ ခငျြးပွညျနယျက မဲဆန်ဒနယျအားလုံးပွိုငျမှာပါ။ မကှေးတိုငျးနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျး မှာလညျးဝငျပွိုငျဖို့ စီစဉျနတေယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ မှာလညျး ရှေးကောကျပှဲ ရှိခဲ့ရငျတော့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား ရေးရာဝနျကွီးနရော ဝငျပွိုငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးဆိုရငျ မဲဆန်ဒနယျ ၆၀ လောကျကို ဝငျပွိုငျဖို့ စီစဉျ နတေယျ”ဟု ပွောသညျ။
ခငျြးပွညျနယျတှငျ မွို့နယျ ၉ ခု ရှိပွီး ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ ၁၈ နရော၊ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ ၉ နရောနှငျ့ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ ၁၂ နရောရှိကာ စုစုပေါငျး မဲဆန်ဒနယျ ၃၉ နရော ရှိကွောငျးသိရသညျ။ CNLD ပါတီ အနဖွေငျ့ ခငျြးပွညျနယျရှိ မဲဆန်ဒနယျ ၃၉ ခုလုံးအပွငျ မကှေးတိုငျး၌ ခငျြးတိုငျးရငျးသား ရေးရာဝနျကွီး မဲဆန်ဒနယျနှငျ့ ပွညျသူ့ လှတျတျော၊ အမြိုးသားလှတျတျောတို့ အပါအဝငျ အနညျးဆုံး မဲဆန်ဒနယျ ၇ ခု ဝငျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထို့ပွငျ စဈကိုငျးတိုငျး၌ ခငျြးတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး မဲဆန်ဒနယျ၊ တမူးနှငျ့ ကလေးမွို့နယျတို့၌ မဲဆန်ဒနယျအားလုံး ဝငျပွိုငျ သှားမညျဖွဈပွီး ရခိုငျပွညျနယျတှငျလညျး ခငျြးတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးနရော ဝငျပွိုငျရနျ စီစဉျနကွေောငျး CNLD ပါတီ ထံက ဆိုသညျ။ ပူးတှဲ ဥက်ကဋ်ဌ ပူးနိုထနျကပျက“ကနြျောတို့က ကိုယျစားလှယျလောငျး ရှေးရာမှာ လူငယျနဲ့ အမြိုးသမီးကို အဓိက ဦးစားပေးပါတယျ။ ခငျြးလူမြိုးထဲမှာ နိုငျငံခွားကနေ Political Science (နိုငျငံရေး သိပ်ပံ) မာစတာတနျးပွီးလို့ ဘှဲ့ရသူ တှရှေိတယျ။ အဲဒီလို လူတှကေို ဦးစားပေးပါတယျ။ ယခငျတုနျးက ဧပွီလကုနျမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျး အမညျစာရငျး အကုနျပို့ဖို့ လုပျထားပမေယျ့ ကိုဗဈဖွဈလာလို့ ဇှနျလကုနျမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျး အမညျစာရငျး အကုနျပို့ဖို့ ညှနျကွားထား ပါတယျ” ဟု ပွော သညျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလတှငျ ခငျြးပွညျနယျရှိ ပါတီ ၃ ခုဖွဈသညျ့ ပူးနိုထနျကပျ ဦးဆောငျသော ခငျြးတိုးတကျရေး ပါ တီ (CPP) ၊ ပူးဇိုဇမျ ဦးဆောငျသော ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ (CNDP) နှငျ့ ဦးငိုငျဆတျ ဦးဆောငျသော ခငျြး ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ ပါတီ (CLD) တို့ ပူးပေါငျး၍ ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (CNLD) ပါတီကို ပွနျလညျ တညျ ထောငျကာ ပွညျထောငျစုရှေးကာကျပှဲကျောမရှငျတှငျ မှတျပုံတငျခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈတှငျ ခငျြးပါတီ ၃ ခု ပူး ပေါငျး၍ CNLD ပါတီ တညျထောငျကာ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ အငျအားကွီး ပါတီမြားကို ယှဉျပွိုငျသှားရနျ ပွငျဆငျလာခွငျး ဖွဈသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ၌ ၂၀၁၅ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲဆန်ဒနယျ စုစုပေါငျး ၃၉ နရော ရှိသညျ့အနကျ NLD ပါတီက ၂၈ နရော၊ ဇိုမီး ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (ZCD) ပါတီက ၆ နရောနှငျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (USDP) က ၅ နရော အနိုငျ ရရှိခဲ့သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/06/16/224709.html
ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှငျ တဈဆို့မှု ဖွဈစသေော အကွောငျးအရာမြားနှငျ့ပတျ သကျ၍ ကြျောလှားနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြား ကို ရှာဖှနေကွေောငျး NCA ရေးထိုးထားသော တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ ကိုယျစားလှယျမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျး ထားသညျ့ NCA အကောငျအထညျဖျောမှုဆိုငျရာမူဘောငျ ညှိနှိုငျးရေးအဖှဲ့ ညှိနှိုငျးရေးမှူး ရဲဘျော မြိုးဝငျးက ပွောကွား သညျ။ နပွေညျတျောတှငျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇူလိုငျ အတှငျးက ကငျြးပခဲ့သော ၂၁ ရာစုပငျလုံ တတိယအစညျးအဝေးအပွီး ဆကျ လကျ ကငျြးပခဲ့သညျ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲမြားတှငျ တဈခုတညျးသော တပျမတျော၊ ပွညျထောငျစုမှ ခှဲမထှကျရေးဟူသောအခကျြ မြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှငျ တဈဆို့မှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့သညျ။
“တဈဆို့နတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ကြျောလှားနိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ အဲဒီတဈဆို့နတေဲ့ အ ကွောငျးအရာကအားလုံးသိတဲ့အတိုငျးပဲ ခှဲမထှကျရနဲ့တဈဆို့နတောရှိတယျ။ တဈခုတညျးသောတပျမတျောဆိုတဲ့ အကွောငျး အရာနဲ့ တဈဆို့နတောရှိတယျ။ ဒီတဈဆို့နတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ကြျောလှားနိုငျ မယျ့နညျးလမျးတှကေို ကြှနျတျောတို့ ရှာနတေယျ”ဟု ရဲဘျောမြိုးဝငျးက ပွောကွားသညျ။ လုံခွုံရေးကဏ်ဍတှငျပါဝငျသညျ့ တဈခုတညျးသော တပျမတျောထားရှိ ရေးနှငျ့ခှဲမထှကျရေးဟူသောကိစ်စမြားသညျ ဆကျလကျဆှေးနှေးရမညျ့ကိစ်စရပျမြားဖွဈသျောလညျး လကျရှိအခြိနျတှငျ အဆိုပါ အကွောငျးအရာနှငျ့ပတျသကျ၍ သီးခွားဆှေးနှေးမှုမရှိသေးကွောငျး ရဲဘျောမြိုးဝငျးက ပွောကွားသညျ။ “အဲဒီအကွောငျး အရာသကျသကျတော့ ကြှနျတျောတို့ မဆှေးနှေးဘူး။ ဒါတှကြေျောလှားနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှကေိုတော့ ကြှနျတျောတို့ ရှာဖှေ နပေါတယျ”ဟု ရဲဘျော မြိုးဝငျးက ပွောကွားသညျ။
တပျမတျောက တငျသှငျးခဲ့သညျ့ တဈခု တညျးသော တပျမတျောထားရှိရေးကိစ်စကို တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျး မြားကလကျခံသျောလညျး ယငျးကိစ်စအားမညျသို့ပွုပွငျပွောငျးလဲကငျြ့သုံးမညျဟူသညျ့ နညျးစနဈနှငျ့ပတျသကျ၍ တပျမတျော နှငျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားအကွား သဘောထားကှဲလှဲခဲ့သညျ။ အဆိုပါကိစ်စရပျမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ သဘောထားကှဲလှဲမှုမြားဖွဈပျေါခဲ့ပွီးနောကျ တဈဆို့သှားသော ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ပွနျလညျရှဆေ့ကျနိုငျရေးအတှကျ အစိုးရ၏ ငွိမျးခမျြးရေးကျောမရှငျမှ ကိုယျစားလှယျမြားသညျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ တဈဖှဲ့ခငျြး ဖွဈစေ၊ အစုအဖှဲ့ဖွငျ့ ဖွဈစေ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ရပွီး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဇနျနဝါရီတှငျ ရှဈကွိမျမွောကျ JICM အစညျးအဝေး ကငျြးပခွငျးဖွငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျဆိုငျရာ တရားဝငျအစညျးအဝေးမြား ပွနျလညျစတငျနိုငျခဲ့သညျ။ https ://news-eleven.com/article/178333
မွနျမာအစိုးရက မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈကွတဲ့ KIA, AA, TNLA နဲ့ MNDAA တို့ကို တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ ဒီလ ဆနျးပိုငျးက ဖိတျကွားခဲ့ပါတယျ။ အခုလို အစိုးရနဲ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ဝငျတှအေကွား တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့အတှကျ နိုငျငံတျောသမ်မတရုံး ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးဇျောဌေး က PCG (Peace-talk Creation Group) ချေါ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေး ရေး အကြိုးဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးလမိုငျဂှနျဂြာ ကတဆငျ့ ဖိတျကွားခဲ့ပါတယျလို့ PCG အဖှဲ့ဝငျတဦးဖွဈတဲ့ ဦးစနျးအောငျက RFA ကို ပွောပါတယျ။
AA ပွောခှငျ့ရ ခိုငျသုခက အခုလို အစိုးရဖကျက ဖိတျကွားခကျြကို ဇှနျလ ၅ ရကျနကေ့ ရရှိခဲ့ပွီးနောကျ အပွနျအလှနျ ညှိနှိုငျး နကွေောငျး၊ အစိုးရဖကျက ကြိုငျးတုံမှာတှဖေို့ ကမျးလှမျးခဲ့ပွီး လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါ ပွဿနာကွောငျ့ သူတို့အဖှဲ့ သှားရောကျဖို့ အခကျအခဲရှိကွောငျး၊ ဒါ့အပွငျ AA ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးအဖွဈ အစိုးရက ကွညောထားတဲ့ အတှကျ လုံခွုံရေးအရလညျး စဉျးစားရကွောငျး၊ အငျတာနကျကနေ ဗီဒီယိုနဲ့ ဆကျသှယျဆှေးနှေးဖို့ထကျ လူခငျြးတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးဖို့ သူတို့အဖှဲ့က လိုလားကွောငျး RFA ကို ပွောပါတယျ။
တပွိုငျနကျမှာပဲ အစိုးရနဲ့ နီးစပျသူတဦးက ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲတခုကို နပွေညျတျောမှာ လာမယျ့ ၂၃ ရကျနေ့ လောကျ ကငျြးပနိုငျဖို့အတှကျ အစိုးရနဲ့ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှေ ညှိနှိုငျးနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ PCG အဖှဲ့ဝငျ ဦးစနျးအောငျ ကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေအေရ ဒီနှဈအတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ တခုလောကျပဲဖွဈပျေါနိုငျမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ အစိုးရဖကျက ပီပီပွငျပွငျလုပျဆောငျမှု အားနညျးတယျ၊ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျရေးအတှကျ ဆှေးနှေးပှဲတှမြေားမြားလို တယျလို့ သူက ဝဖေနျပါတယျ။
CPR Center for Peace and Reconciliation ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဗဟိုဌာနညှနျကွားရေးမှူး ဦးညိုအုနျးမွငျ့ က အဲဒီလို ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားတှဘေကျကလညျး ခဏတာဖွဈစေ အပဈအခတျရပျစဲဖို့ သငျ့တယျလို့ အကွံပေးပါတယျ။ အစိုးရအသိုငျးအဝနျးနဲ့ နီးစပျသူတှကေရော တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှနေဲ့ နီးစပျသူတှကေပါ တညီတညှတျ ပွောဆိုနကွေတဲ့အခကျြကတော့ မွနျမာပွညျဟာ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ အလှမျးဝေးနဆေဲ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ အခကျြပါပဲ။ https://www.rfa.org/burmese/news/peace-kia-aa-mndaa-tnla-06122020192805.html
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဂှမွို့နယျ(ခှဲ) ကြိန်တလီမွို့တှငျ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးတပျမတျော/ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ (ALA/ALP) အဖှဲ့ဝငျသုံးဦးကို ပုဒျမ ၆ ခုဖွငျ့ အမှုဖှငျ့လှဈထားကွောငျး ကြိန်တလီနယျမွေ ရဲစခနျးမှ စခနျးမှူးရဲအုပျ ကြျောလှငျဦး က ပွောသညျ။
၎င်းငျးတပျဖှဲ့ဝငျတို့သညျ ယခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလအတှငျးက ကြိန်တလီဒသေသို့ ရောကျရှိလာကာ လိုငျစငျမရှိဘဲ ကြောကျထုတျ လုပျခွငျး၊ သဲထုတျလုပျခွငျး စသညျ့စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျနကွေပွီး ‌ဒသေခံမြားကို ဆဲဆိုခွိမျးခွောကျခွငျး စသညျ့ ကိစ်စမြားဖွဈပျေါလာကွောငျး ဒသေခံမြားကဆိုသညျ။“ကနြျောသူတို့ (ALA တပျဖှဲ့ဝငျ) သဲကြောကျလုပျနကွေတာကို ဓါတျပုံ ရိုကျဖို့လုပျတော့ ဘကျဖိုးနားက ထှကျလာပွီးတော့ ကနြျော့ကိုမေးတော့ ဓါတျပုံရိုကျဖို့လာတာလို့ ပွောတယျ။ သူတို့ကမလို ဘူး ဘယျကောငျမှ ရိုကျခှငျ့မရှိဘူး။ ငါတို့ ရခိုငျအခငျြးခငျြး မသတျခငျြဘူး၊ ငါတို့လူသတျလာတာ မြားနပွေီဆိုပွီးတော့ ဓါးနဲ့ ကနြျော့ လညျဂုတျကို လှီးဖို့လုပျတယျ”ဟု အမှုဖှငျ့ထားသူ ဦးခဈြစမျးမောငျက ရှငျးပွသညျ။
ALA တပျဖှဲ့ဝငျမြားဖွဈသညျ့ ဗိုလျမှူးခိုငျနိုငျလငျး၊ ဗိုလျကွီးခိုငျအောငျလငျးနှငျ့ ခိုငျပွညျသိနျးတို့ကို ကြိန်တလီမွို့အပိုငျ ဘိုက လေး ကြေးရှာသားအခြို့နှငျ့ သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျမြားက ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၂၉၄၊ ၃၅၂၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄၊ ရအေရငျးအမွဈ ဥပဒေ ပုဒျမ-၂၆ တို့အပွငျ ဆေးကောငျစီ ဥပဒေ ပုဒျမ- ၅၈ တို့ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့လှဈထာကွောငျး စခနျးမှူးကပွောသညျ။ လကျရှိ အခြိနျ၌ အမှုဖှငျ့ခံထားရသူမြား ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနကွေ၍ ဖမျးဆီးနိုငျခွငျးမရှိသေးကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျ၍ပွောသညျ။
ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရတေပျမတျော (ALA) စဈရေးကျောမတီက ဗိုလျမှူးကွီးခိုငျစိုးမွက အဆိုပါနရောတှငျ သဲ၊ ကြောကျ လုပျငနျး လုပျကိုငျနကွေသညျမှာ ၎င်းငျးတို့တပျဖှဲ့မြားသာမဟုတျဘဲ ဒသေခံမြားပါ လုပျကိုငျနကွေခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။“အဲဒီမှာလုပျနတော ကနြျောတို့ လူတှတေငျမဟုတျဘူး၊ ရှာသားတှလေညျးပါတယျ။ ရှာသားတှလေုပျလို့ ကနြျောတို့လညျး လုပျလို့ရတယျထငျပွီးလုပျတာ။ ရှာသားတှကေို တရားမစှဲဘဲနဲ့ ကနြျောတို့ ရဲဘျောတှကေို တရားစှဲတော့ တမငျတရားစှဲသလို ဖွဈနတေယျ”ဟု ၎င်းငျးကဆကျ၍ပွောသညျ။ ယငျးသို့ အမှုဖှငျ့လှဈထားခွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍လညျး ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျ ရေးပါတီအနဖွေငျ့ ပွညျနယျအစိုးရနှငျ့ သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျမြားကို ရုပျသိမျးပေးရနျ တောငျးဆိုထားကွောငျး ဗိုလျမှူးကွီး ခိုငျစိုးမွကဆိုသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73456
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးနှငျ့ ကခငျြပွညျနယျ မနျဝိနျးကွီးဒသေအတှငျးရှိ နရေပျစှနျ့ခှာစဈပွေးတိမျးရှောငျသူမြား (IDPs) မြား သညျ ကိုဗဈကာလအတှငျး စားဝတျနရေေးအခကျအခဲမြားရှိနခွေငျးကွောငျ့ သကျဆိုငျရာ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားက တာဝနျ ယူ ဆောငျရှကျပေးရနျ စဈရှောငျမြားက မြှျောလငျ့လကျြရှိကွောငျး ရှမျးပွညျနယျ စဈရှောငျပွညျသူမြားအရေး ဆောငျရှကျသူ ဦးနောငျလတျကပွောဆိုသညျ။ အဆိုပါ ဒသေအတှငျး နရေပျစှနျ့ခှာစဈပွေးတိမျးရှောငျသူမြား (IDPs) စခနျး ၃၉ ခုရှိပွီး လူဦး ရေ ၁၄ဝဝဝ နထေိုငျကွောငျးကာ လကျရှိခြိနျတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကွောငျ့ စခနျးပွငျပတှငျ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး လုပျငနျးလုပျကိုငျရနျအတှကျ ကနျ့သတျခကျြမြားရှိနကွေောငျး ၎င်းငျးကပွောဆိုသညျ။
“အဓိကကတော့ တရုတျနယျစပျမှာရှိတဲ့ စခနျးတှထေဲကသူတှကေတော့ တရုတျနိုငျငံမှာ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျတယျ ပေါ့။ နစေ့ားအလုပျသမားတှအေဖွဈပေါ့။ အဲလိုမြိုး အရငျတုနျးက အပွငျမှာသှားအလုပျလုပျနရေတဲ့သူတှကေ ပွနျလာရငျ ကိုဗဈ- ၁၉ ကွောငျ့ စောငျ့ကွညျ့မှုမြား ပွုလုပျခံရတော့ နောကျပွီးတော့ စခနျးမှာရှိတဲ့ လူတှကေိုလညျး အပွငျကိုမသှားခိုငျး တော့တာကွောငျ့ လုပျကိုငျစားသောကျဖို့ အခကျအခဲတှဖွေဈလာပွီးတော့ စားဝတျနရေေး ဒုက်ခရောကျနိုငျတာတှရှေိတာပေါ့။
အဲတော့ ကြှနျတျောတို့ကို သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးက စားနပျရိက်ခာအတှကျ တာဝနျယူဖွရှေငျးပေးဖို့ မြှျောလငျ့တာပေါ့ ” ဟု ဦးနောငျလတျ ကပွောဆိုသညျ။ ထို့ကွောငျ့ IDP စခနျးမြားတှငျ နထေိုငျသူမြားက ဇှနျလ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ ၎င်းငျးတို့၏ စိုးရိမျ ပူပနျမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး အခကျြ ၆ ခကျြပါသော သဘောထား ထုတျပွနျခကျြတဈစောငျထုတျပွနျခဲ့သညျ။
ကိုဗဈကာလအတှငျး ရရှေညျနှဈဖကျလကျနကျကိုငျမြား စဈမကျဖွဈပှားမှုမြားအား ခွှငျးခကျြမရှိ ရပျတနျ့ရနျ၊ ကိုဗဈကာလ ကွာမွငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ စခနျးတှငျးရှိ IDPS မြားသညျ စခနျးပွငျပသို့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးဆိုငျရာလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျ ရနျအခှငျ့အလမျးနညျးပါးခွငျး၊ ကနျ့သတျခကျြမြား ရှိနခွေငျးကွောငျ့ IDPS မြားအား ရရှေညျစားဝတျနရေေး (စားနပျရိက်ခာ) လုံလောကျစှာ ပံ့ပိုးပေးရနျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ မကွာမီ ကြောငျးဖှငျ့ကာလရောကျရှိတော့မညျဖွဈသောကွောငျ့ IDPS စခနျး မြားရှိ နရေပျစှနျ့ခှာ ကလေးငယျမြား ပညာသငျကွားရေးအတှကျ အခွခေံပညာအခှငျ့အရေးတနျးတူရရှိရေး ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက လမျးညှနျထုတျပွနျထားသညျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျရေးပစ်စညျးမြား သငျထောကျကူမြား ဆရာ၊ဆရာမမြား စာသငျဆောငျမြားအား လုံလောကျစှာပံ့ပိုးပေးရနျလညျး တောငျးဆိုခကျြတှငျဖျောပွ ထားသညျ။
နိုငျငံတကာ စဈဘေးရှောငျသူမြား အိုးအိမျမွယော ပိုငျဆိုငျခှငျ့နှငျ့ ပွနျလညျလုပျပိုငျခှငျ့မြားဆိုငျရာ အခှငျ့အရေးမြားနှငျ့အညီ နရေပျစှနျ့ခှာ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား၏ မူရငျးကြေးရှာဒသေရှိ မွယောနှငျ့ သဘာဝအရငျးအမွဈမြားအား အစိုးရနှငျ့ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားက ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးရနျ စသညျ့အခကျြမြားကိုလညျး တောငျးဆိုထားသညျ။ https://www.khitthitnews.com/2020/06/%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80
မငျးတပျမွို့တှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါထိနျးခြုပျရေး အစီစဉျအရ Quarantine ဝငျရသူ ပွညျပပွနျလာသူမြားမှာ ကိုယျ့စရိတျ နှငျ့ကိုယျနရေကွောငျး ဒသေခံမြားထံသိရသညျ။ Quarantine ဝငျရသူမြားကိုကူညီပေးနသေော မငျးတပျမွို့ရှိ ဒသေခံ တဈ ဦးက “အခု Quarantine စုစုပေါငျးရငျ ၁၁ ယောကျရှိပွီ ဒီလို Quarantine ဝငျနတေဲ့ခြိနျမှာ အစားသောကျနဲ့ ပကျသကျပွီး အခြို့က အရမျးခကျခဲတယျ တခြို့က မငျးတပျမွို့နယျမှာ ရှာမှာနတေဲ့ လူတှဆေိုတော့ သူတို့ကို ကူညီပေးမဲ့လူမရှိရငျ အရမျး ခကျခဲတယျ နောကျပွီးလကျရှိ Quarantine ဝငျနတေဲ့သူတှကေလညျး သူတို့စရိတျနဲ့ သူတို့နနေရေတယျလို့သိရတယျ”ဟု ပွောသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ မွို့နယျအားလုံးကို ၄ လပိုငျးလောကျမှ စတငျပွီး Quarantine ဝငျနရေသူမြားကို ပွညျနယျအစိုးရမှ ထောကျပံ့ ကွေးမြား ပေးထားသညျဟု သိရသျောလညျး မငျးတပျတှငျ ထမငျးဖိုးမြား ပေးရသညျဟု Quarantine မြားကို ကူညီဆောငျ ရှကျပေးနသေညျ့ အသငျးဖှဲ့မြားကပွောသညျ။ မငျးတပျမွို့နယျရှိ အုပျခြုပျရေးဖကျမှတာဝနျရှိသူမြားမှ ပွညျပပွနျ Quarantine ဝငျနရေသူမြားကို မွို့အစီစဉျနှငျ့လညျးကောငျး၊ အစိုးရမှထောကျပံ့ပေးသညျ့ ငှကွေေးမြားကို တာဝနျရှိသူမြားကို သခြောပေး လိုကျကွောငျး မငျးတပျမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးမငျးဧရာထိုကျက ပွောသညျ။
မငျးမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးမငျးဧရာထိုကျက “မွို့အစီစဉျနဲ့ ကတြျောတို့က ဒီ Quarantine ဝငျတဲ့လူတှကေိုကြှေးမှေးတယျ နောကျပွီး ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရကလညျး ဒီဟာနဲ့ပကျသကျပွီး ပေးတယျ အဲဒီပေးတဲ့ ဟာတှကေိုလညျး Quarantine ဝငျတဲ့ လူတှကေို ခကျြပွုတျလုပျပေးတဲ့ တာဝနျရှိတဲ့ သူတှကေို ပေးတယျ အဲဒါကို မပေးဘူးလို့ လူမှုကှနျရကျတှမှော လြှောကျတငျ နကွေတာ”ဟု ပွောသညျ။ မငျးတပျမွို့တှငျ ဇှနျလ ၂ ရကျနကေ့ မလေးရှားမှ ပွနျလာပွီး Quarantine ဝငျသူ တဈဦးတှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးတှရှေိ့ခဲ့ပွီး အဆိုပါ case-232 ကို ဟားခါးပွညျသူ့ ဆေးရုံကွီးတှေ ပို့ဆာငျခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionl ine.net/mm/news-73473
ရခိုငျပွညျနယျ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ဒုံးပိုကျ နယျခွားစောငျ့ ရဲကငျးစခနျးကို ဇှနျလ ၁၃ ရကျ နံနကျ ၅ နာရီဝနျးကငျြ အခြိနျခနျ့က ရက်ခိုငျ့ စဈတပျ (AA) အဖှဲ့က လာရောကျတိုကျခဲ့သညျ့အတှကျ တပျဖှဲ့ဝငျတခြို့ ထိခိုကျဒဏျရာမြားရရှိခဲ့ကွောငျး တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက “ ဒီနေ့ မနကျ ၅ နာရီခှဲလောကျမှာ ဒုံးပိုကျ နယျခွားစောငျ့ရဲကငျးစခနျးကို AA အဖှဲ့က လာရောကျ နှောငျ့ယှကျပဈခတျတာရှိတယျ။ ၁၅ မိနှဈခနျ့လောကျ ပဈခတျခဲ့ပွီးနောကျ ဆုတျပွေးသှားတယျ။ ဖွဈစဉျမှာတော့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတခြို့ ထိခိုကျဒဏျရာတာရှိတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွော သညျ။ ထိုတိုကျခိုကျမှုဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး တပျမတျောစဈကွောငျးမြားနှငျ့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ပူးပေါငျး ကာ နယျမွရှေငျးလငျးရေး လုပျဆောငျလြှကျရှိကွောငျးလညျး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။
ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ဒုံးပိုကျကြေးရှာအနီးရှိ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ၁ ဦးက ယနေ့ မနကျပိုငျးက အဆိုပါ နယျခွားစောငျ့ ရဲ စခနျးဘကျမှာ နှဈဘကျအပွနျအလှနျ ပဈခတျသံမြားကိုကွားရသျောလညျး ဖွဈစဉျအသေးစိတျကိုမသိရှိကွောငျး ပွောသညျ။ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးက “ဒီနေ့ နံနကျ ၅ နာရီလောကျမှာ အဲဒီစခနျးဘကျက အပွနျအလှနျပဈခတျသံတှတေော့ကွား တယျ။ အသေးစိတျကိုတော့ ကနြျောတို့လညျး မသိဘူး။ လူနာတငျကား တှတေော့ သှားတာတှတေ့ယျ။ ဒုံးပိုကျရှာသားတှေ စိုးရိမျပွီး ရှာကထှကျပွေးနကွေလို့ ဖုနျးဆကျလို့လညျး မရဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ရသတေ့ောငျမွို့နယျအတှငျးက ဒုံးပိုကျနယျခွားစောငျ့ရဲကငျးစခနျးမှာ ပငျလယျကမျး ကမျးခွအေတိုငျး ဖောကျလုပျထားသညျ့ အငူမျော – မောငျတျော ကား လမျးမကွီးပျေါတှငျ တညျရှိသော အငူမျော နယျမွရေဲစခနျး လကျအောကျခံ ရဲကငျးစခနျး တခုလညျး ဖွဈသညျ။
ထိုရဲစခနျးမြားအား တိုကျခိုကျသညျ့ ဖွဈစဉျမြားတှငျ တပျဖှဲ့ဝငျ မိသားစုဝငျမြား ဖမျးဆီးခံရမှုရှိခဲ့သျောလညျး နောကျပိုငျးတှငျ AA အဖှဲ့က ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့သညျ။ ထိုသို့ နယျမွလေုံခွုံရေးနှငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး လုပျငနျးမြားကို လုပျဆောငျနေ သော ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားကို AA အဖှဲ့က လာရောကျတိုကျခိုကျခွငျးမှာ စဈရာဇဝတျမှုကို ကြူးလှနျရာရောကျကွောငျး တပျမတျော က ပွောဆို ထားသညျ။
ပွီးခဲ့သော ရကျပိုငျးအတှငျးက ခငျြးပွညျနယျ ၊ပလကျဝ မွို့နယျအတှငျး ဒဏျရာရ AA တပျဖှဲ့ဝငျမြားအား ဆေးကုသနသေော ယာယီစခနျးတခုကို တပျမတျောက အငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ လာရောကျတိုကျခိုကျခဲ့သညျ့အတှကျ လကျတုနျ့ပွနျသညျ့ အနဖွေငျ့ ထိုသို့ သဇငျမွိုငျ ရဲကငျးစခနျးအား တိုကျခိုကျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး AA အဖှဲ့၏ မလေ ၂၉ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျခကျြ တှငျ ဖျောပွထားသညျ။ ယငျးအပွငျ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားဆိုသညျမှာ တပျမတျောလကျ အောကျတှငျရှိပွီး တပျမတျော ၏ စဈဆငျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျမှု၊ ရဲစခနျးမြားကနေ လကျနကျကွီးယာယီ စခနျးမြားထိုငျကာ ပဈခတျမှုမြားရှိ သညျ့အတှကျ ရဲစခနျးမြားကို တိုကျခိုကျရခွငျးဖွဈကွောငျး AA အဖှဲ့က ယခငျ ဖွဈစဉျမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ပွောဆိုထားသညျ။ https://burma.irrawadd y.com/news/2020/06/13/224572.html
လှိုငျကျောမွို့နယျ ဒေါလိုရှေးရှာအနီး လြှပျစဈတာဝါတိုငျအောကျခွတှေငျ မွှုပျထားသောမိုငျးမြားပျေါလာသဖွငျ့ အနီးရှိ တောငျသူလယျသမားမြားမှာ ပေါကျကှဲထိခိုကျမညျကို စိုးရိမျနကွေရကွောငျးသိရသညျ။“လယျပိုငျရှငျက လယျသှားထယျ ရငျးနဲ့ သူရဲ့တာဝါတိုငျအောကျ သူခြောငျးကွညျ့တာပေါ့။ ကြှနျတျော့ကို လာအကွောငျးကွားတာပေါ့။ တဈလုံးမဟုတျ နှဈလုံး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျပေါ့။ အခုလောလောဆယျတှတေ့ာတော့ နှဈလုံးပေါ့၊ တိုကျမိုငျးနဲ့နငျးမိုငျးတဈလုံးပေါ့”ဟု ဒေါလိုရှေး အုပျခြုပျရေးမှူး ခူးရှားရယျက ပွောကွားသညျ။
လယျပိုငျရှငျခူးငါးရယျ၏ လယျထဲရှိ တာဝါတိုငျအမှတျ ၁၀၈ အောကျခွတှေငျ တိုကျမိုငျး နှငျ့ နငျးမိုငျး နှဈလုံးကို ဇှနျ ၁၀ ရကျ က လယျထှနျရာမှတှရှေိ့သဖွငျ့ ဇှနျ ၁၁ ရကျတှငျ တပျက ဝါးဖွငျ့ လာရောကျခွံစညျးရိုးခတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။“အုတျ တံတိုငျးနဲ့ခတျရငျပိုသခြောတာပေါ့။ ဝါးနဲ့ခတျရငျအဆငျမပွဘေူး။ တဈနေ့ မဟုတျရငျ တဈနတေ့ော့ပကျြမှာပဲ။ ခွံကာလိုကျ ရငျ မွကျတှဘောတှထေူလာရငျ နှားက သူ့အစာတှရေ့ငျတော့ ဝငျမှာပဲ။ လောလောဆယျကတော့ အုတျတံတိုငျးပဲကာ စခေငျြတယျ” ဟု ဒေါလိုရှေးအုပျခြုပျရေးမှူး ခူးရှားရယျက ပွောကွားသညျ။
ဒေါလိုရှေးကြေးရှာသညျ လြှပျစဈမီးစတငျရရှိခဲ့သညျမှာ ငါးနှဈခနျ့သာရှိသျောလညျး လှနျခဲ့သညျ့ နှဈ ၃၀ အတှငျး တာဝါတိုငျ မြားအား ဝါးဖွငျ့ကာရံပေးရခွငျး၊ ညကငျးမြားအား အလှညျ့ကစြောငျ့ပေးရခွငျး၊ လုပျအားပေးအဖွဈချေါယူသဖွငျ့ အခမဲ့ လုပျဆောငျပေးရခွငျးမြားရှိခဲ့ကွောငျး၊ တာဝါတိုငျအောကျခွသေို့ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြားဝငျရောကျရာမှ ပေါကျကှဲပွီး လူကိုပါ ဗုံးစထိမှနျခဲ့ခွငျးမြား ရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/178458
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ တောငျကွီးမွို့နယျ၊ ရှညေောငျမွို့၊ သုခခမျြးသာရပျကှကျရှိ အမှတျ (၁) တညျးခိုရေးတပျစခနျး Quarantine Center မှာ အမြိုးသမီးတဦး ဇှနျ ၁၄ ရကျ မနကျပိုငျးက သဆေုံးသှားတယျလို့ ရှညေောငျအုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောပါတယျ။ သဆေုံးသူမှာ နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူဖွဈပွီး ဇှနျ ၁၀ ရကျနမှေ့ ရှညေောငျမွို့ Quarantine Centre ကို မွဝတီ ကတဆငျ့ ရောကျရှိလာတာ ဖွဈပါတယျ။
ရှညေောငျမွို့ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသကျဦးမောငျက “ဇှနျ ၅ ရကျနကေ့ မွဝတီ Center မှာ ဓာတျခှဲနမူနာယူပွီး စဈဆေးထား တယျ။ မွဝတီဆေးရုံမှာ တကျခဲ့တယျ။ သူက မှေးရာပါ နှလုံးအပေါကျပါ နှလုံးအားနညျးသူပေါ့။ အဲဒီရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတကျ တယျ။ ဆေးမှတျတမျးတှရှေိတယျ။ ၅ ရကျနကေ့ ယူထားတဲ့ ဓာတျခှဲနမူနာက negative အဖွထှေကျတယျ။ ကနြျောတို့ Center ကို ၁၀ ရကျနေ့ ရောကျလာတယျ။ ဒီနမေ့နကျ Center မှာရှိသူအားလုံး ဓာတျခှဲနမူနာယူဖို့ လာတာ မနကျစာစားဖို့ သူ့ကိုနှိုးတော့ နှိုးလို့မရတော့ဘူး၊ ကနျြးမာရေးဆရာတှေ စဈဆေးတဲ့အခါ သဆေုံးသှားပွီ ဖွဈပါတယျ”လို့ ပွောပါတယျ။
ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေ နှလုံးရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသှားတယျလို့ သုံးသပျထားပမေယျ့ သခြောအောငျ ဓာတျခှဲနမူနာ ယူပွီး ဓာတျခှဲဌာနကို ပို့ဆောငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ သဆေုံးသူမှာ ကြိုငျးတုံမွို့၊ မိုငျးယောငျးကြေးရှာနေ အသကျ ၄၀ အရှယျ အမြိုးသမီး ၁ ဦးဖွဈပွီး ဘနျကောကျမွို့ကနပွေနျလာတာဖွဈပါတယျ။ သဆေုံးသူအမြိုးသမီးဟာ ရှညေောငျမွို့ Quarantine Centre မှာ တခနျးတညျး အတူနသေူ ၁၆ ဦးရှိပွီး Center တခုလုံးမှာ မွဝတီကပွနျလာသူ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ၇၃ ဦး ရှိပါ တယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/394135
ကခငျြ လှတျလပျရေး အဖှဲ့ (KIO) ဗဟို COVID-19 ကာကှယျနှိမျနှငျးရေး ကျောမတီက လကျရှိလုပျဆောငျ နသေော COVID-19 ကပျရောဂါအပွငျ အခွားသော ရောဂါမြားကာကှယျရေးမြားကို တိုးခြဲ့လုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဇှနျလ (၁၀) ရကျနေ့ အစညျးအဝေးတှငျ ဆုံးဖွတျခဲ့သညျ။ United For Health (COVID-19 Response Group Kachin State) မှာ လကျတှေ့ ဦးဆောငျနသေော ဒျေါလဘနျခေါနျဂြာ က မိုးရာသီရောကျလာပွီ ဖွဈသောကွောငျ့ အခွားကူးစကျရောဂါမြားနှငျ့ COVID-19 တှဲပွီး ဖွဈမညျကို စိုးရိမျကွောငျး ပွော သညျ။
“ကမြတို့လညျး အခု ပိုပွီးမှ သတိရှိရမယျ၊ ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ ဒီမိုးတှငျးကာလက COVID-19 ကိုပိုပွီးမှ အားပေးတဲ့ သဘာဝတရား ကမြတို့မှာ ဖွဈနတေဲ့အတှကျ နောကျနှဈနှရောသီအထိ သတိရှိနဖေို့လိုပါတယျ၊ ဥပမာ COVID က သှေးလှနျ တုပျကှေးနဲ့ ငှကျဖြားရောဂါရောပွီး ရောဂါလက်ခဏာ မပွပဲဖွဈမှာကိုလညျး စိုးရိမျရတဲ့အတှကျ ရောဂါကို ကာကှယျတဲ့ အခြိနျ မှာ COVID-19 တဈခုကိုပဲ ကာကှယျတာမဟုတျပဲနဲ့ တခွား ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ရောဂါတှကေိုလညျး အတူကာကှယျနိုငျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ အဲ့ဒါကိုလညျး သတိထားရမယျ”ဟု ပွောသညျ။ COVID-19 တဈခုတညျးကိုပဲ ကာကှယျခွငျးမြိုး မဟုတျပဲ အခွားရောဂါမြားကိုလညျး ပူးပေါငျးကာကှယျသှား မညျ ဖွဈကွောငျး ဒျေါလဘနျခေါနျဂြာ က ပွောသညျ။
COVID-19 ကာကှယျနှိမျနငျးရေးကျောမတီ၏ စတုတ်ထအကွိမျအစညျးအဝေးတှငျ ကျောမတီကထုတျပွနျထားသော စညျးမဉျြး စညျးကမျးမြားကို ပိုမိုထိရောကျစရေနျ တာဝနျရှိသော အဖှဲ့အစညျးအသီးသီးက ပိုမိုလုပျဆောငျကွရနျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွောငျးကို လညျး KIO ဗဟိုကျောမတီ က ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျတားဆီးရေးကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး ဦးလဖိုငျဟိနျးဝမျ က ပွောသညျ။“ကှာရနျတငျးစခနျးနဲ့ စဈဆေးရေးဂိတျတှနေဲ့ လကျတှေ့ ဦးဆောငျနတေဲ့ ကျောမတီတှကေ အလုပျကို ပိုမိုထိ ရောကျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျဖို့နဲ့ ခမြှတျထားတဲ့စညျးမဉျြး စညျးကမျးတှထေဲကတခြို့ စညျးကမျးခကျြတှေ ကို ပွနျလညျပွုပွငျတာပါ”ဟု ပွောသညျ။
ယခု အစညျးအဝေးတှငျ အရေးပျေါအခွအေနမြေားထဲ ဌာနဆိုငျရာမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရမညျ့ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ စာသငျ ကြောငျးမြား ပွနျလညျဖှငျ့လှဈနိုငျရေး ကိစ်စရပျမြားကိုလညျး ဆှေးနှေးကွသညျ။ အစညျးအဝေးကို ကအေိုငျအိုဌာနခြုပျ လိုငျဇာ ရှိ အစိုးရမဟုတျသော အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား (NGO မြား)၊ နိုငျငံတကာ အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့မြား (INGO မြား)၊ ဘာသာရေးအဖှဲ့မြား၊ အမြိုးသမီးရေးရာအဖှဲ့နှငျ့ လူထု အခွပွေု အဖှဲ့အစညျးမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။ https:// www.bnionline.net/ mm/news-73438
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့လယျတှငျ ယမနျနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ခနျ့က ရဲအရာရှိ ၁ ဦး သတျဖွတျခံရ၍ သဆေုံးသှား ကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။
အဆိုပါ သတျဖွတျခံရသူမှာ ကြောကျတျောမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအုပျအောငျမငျးဇျော ဖွဈပွီး မွို့လယျရှိသာသနာ့ဗိမာနျ ရှလေ့မျးမပျေါတှငျရှိနစေဉျ အမညျမသိ လူ ၂ ဦးမှ ဆိုငျကယျဖွငျ့လာရောကျကာ ဓားဖွငျ့ထိုးသတျသှားခွငျးဖွဈကွောငျး ကြောကျတျောမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ တဦးက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ဖွဈစဉျကတော့ ဟုတျတယျ။ သူက CRO (ရဲ မှုခငျးမှတျဌာန) ကိုငျတယျ။ သာသနာ့ဗိမာနျရှေ့ သှားလာနတေုနျး ဆိုငျကယျနဲ့ လူ ၂ ယောကျက ဓားနဲ့လာထိုး သှားတာလို့ ပွောတယျ။ အဲဒီမှာပဲ ဆုံးသှားတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောဆိုသညျ။ ကြောကျတျောမွို့ပျေါတှငျ ထိုသို့ ရဲအရာရှိ ၁ ဦး လုပျကွံ သတျဖွတျခံရသညျ့အတှကျ မွို့ခံမြားမှာ စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုမြားဖွဈပျေါကာ အိမျပွငျမထှကျရဲကွဘဲ အခွအေနကေို စောငျ့ကွညျ့နကွေရကွောငျးလညျး သိရသညျ။
ကြောကျတျောမွို့ခံ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဦးထှနျးဝငျးက “အဲဒီလို ဖွဈတယျလို့တော့ကွားတယျ။ ကနြျော့ လညျး မွငျတာတော့မဟုတျဘူး။ လူတှလေညျး တယောကျမှ သှားမကွညျ့ရဲကွဘူး။ အားလုံးအိမျထဲကနေ အိမျပွငျမထှကျ ရဲကွဘူး။ ဆိုငျတှလေညျး အကုနျပိတျထားကွတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ဖွဈစဉျအား အသေးစိတျသိရှိနိုငျရနျ ဧရာဝတီ မှ ရခိုငျပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူးကွီး မောငျမောငျစိုးအား ဆကျသှယျ ခဲ့သျောလညျး ဆကျသှယျ၍ မရရှိခဲ့ပါ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားအပါအဝငျ ကြေးရှာတခြို့၌ ယခုကဲ့သို့သောလုပျကွံသတျဖွတျခံရသညျ့ ဖွဈစဉျမြားက ခတျစိပျစိပျ ဖွဈပှားနပွေီး သတျဖွတျခံရသညျ့ အကွောငျးရငျးမြားနှငျ့အတူ ကြူးလှနျသညျ့တရားခံမြားကို လကျရှိအခြိနျအထိ ဖျောထုတျဖမျးဆီးနိုငျခွငျး မရှိသေးပေ။ ရခိုငျပွညျနယျ မွို့နယျအသီးသီး၌ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ဝငျမြား နှငျ့ ရှာသားမြားမှာ ယခုကဲ့သို့ ဓားဖွငျ့ထိုးကာ သတျဖွတျခံရခွငျး၊ နအေိမျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျ၍ သနေတျဖွငျ့ ပဈသတျခံရ ခွငျး စသညျ့ဖွဈစဉျမြား ဖွဈပှားနသေဖွငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြားကွား လုံခွုံမှုမရှိခွငျးကွောငျ့ စိုးရိမျမှုမွငျ့တကျလကျြရှိနသေညျ။ https://burma .irrawaddy .co m/news/2020/06/14/224576.html
မှနျပွညျနယျ ရေးမွို့နယျတောငျပိုငျး မနျကွီးကြေးရှာအုပျစုအတှငျး ဗလဲ့ခပှားတောငျကိုအမှီပွု၍ မွနျမာရှဧေကရာဇျ သတ်တု တူးဖျောရေးကုမ်ပဏီ၏ စီမံကိနျးလုပျငနျးနှငျ့အကွုံးဝငျသညျ့ ဓနိကွာစံပွကြေးရှာ တညျဆောကျရေးအတှကျ ဒသေခံထောကျခံ လကျမှတျမြားကောကျခံရာတှငျ ရှာသားအမြားစုလကျမခံကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။ ဘိုးဘှားအစဉျအဆကျမြားစှာ ကတညျး က ဥယြာဉျခွံမွစေိုကျပြိုးလုပျကိုငျနထေိုငျလာကွသညျ့ ဒသေခံမြားကို ဓနိကွာအပွငျရှာနှငျ့ အတှငျးရှာအကွားရှိ စံပွရှာသဈ တညျဆောကျမညျ့ မွေ ၁၂ ဧကအကယျြရှိသညျ့နရောသို့ နအေိမျမြားရှပွေ့ောငျးရနျ အဆိုပါကုမ်ပဏီက ကွိုးပမျးအကောငျ အထညျဖျော လုပျဆောငျနခွေငျးဖွဈသညျ။
မနျကြီးကြေးရှာသား နိုငျဟောငျးစားက “အခုသူတို့ အကောငျအထညျဖျောနတေဲ့ ဓနိကွာစံပွကြေးရှာဆိုတာက ကနြျောတို့ အတှကျဘာမှ အကြိုးမရှိပါဘူး၊ တဈခွားဒသေကလူတှခေျေါလာပွီး ကနြျောတို့လူမြိုးအပျေါ လှမျးမိုးနိုငျဖို့ဖွဈတယျ၊ ကုမ်ပဏီ ဘကျက ရငျးနှီွးှမှုပျနှံရငျ ကနြျောတို့ ဒသေခံတှအေတှကျအကြိုးယုတျဖို့ပဲ ရှိပါတယျ၊ သူတို့စံပွကြေးရှာဖွဈလာခဲ့ရငျ အုပျခြုပျ ရေးမှူးတှကေ သူတို့လူမြိုးပဲဖွဈလာမယျ၊ ကနြျောတို့ မူလဒသေခံတှဟော အလိုလိုနရေငျး သူတို့ရဲ့အုပျခြုပျမှုအောကျ ရောကျရှိသှားမှာပါ”ဟု ဆိုသညျ။ ထို့အတူ အဆိုပါ ကုမ်ပဏီလကျရှိအကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနသေညျ့ ဓနိကွာစံပွ ကြေးရှာ မွနေရောသညျ ရှာသားမြားပိုငျဆိုငျသော လကျရှိခွံမွနေရောမြားသာ ဖွဈနသေညျ့အတှကျ ကနျ့ကှကျရခွငျးဖွဈ ကွောငျး ဓနိကွာအပွငျရှာနေ မိညှနျ့စိနျက ပွောသညျ။ မိညှနျ့စိနျက “တကယျလို့ဒီနရောကနေ ကမြတို့ပွောငျးမယျဆိုရငျ ကမြတို့အတှကျ ဘာမှအကြိုးမရှိပါဘူး၊ ဒါကွောငျ့ ကမြတို့မသှားဘူး၊ လကျရှိကမြတို့နထေိုငျနတေဲ့ နရောကလညျး အကောငျးပဲ၊ ကမြတို့အိမျတှကေလညျး အကောငျးပဲရှိနသေေးတာ ဒီနရောက ကမြတို့ မိဘတှထေားပေးခဲ့တဲ့ ခွံမွတှေဖွေဈ တဲ့အတှကျ ဒီနရောမှာပဲ ကမြတို့ ဆကျနသှေားမယျ” ဟု ဆိုသညျ။
အဆိုပါ ဗလဲ့ခပှားတောငျတဝိုကျတှငျ မွနျမာရှဧေကရာဇျကုမ်ပဏီက လယျယာမွမြေားစှာကို အခွားနညျးဖွငျ့ အသုံးပွုခှငျ့ လြှောကျ ထားရရှိထားပွီးဖွဈသညျ့အပွငျ ဥယြာဉျခွံမွနေရောအခြို့ကိုလညျး လမျးခငျးကြောကျတူးဖျောထုတျလုပျခှငျ့ ဆကျ လကျ လြှောကျ ထားကွောငျး ကုမ်ပဏီ၏ မနျးနဂေငျြးဒါရိုကျတာ ဦးကွညျစိုးက မှနျသတငျးအဂေငျြစီကို ပွောခဲ့သညျ။
NLD အစိုးရလကျထကျ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှစတငျ၍ ဗလဲ့ခပှားတောငျ၌ ကြောကျမိုငျးထုတျလုပျရနျ ဒသေခံမြား ကနျ့ကှကျနေ သညျ့ကွားကပငျ မွဧေက ၁၀ဝ ကြျောခနျ့ကို မွနျမာရှဧေကရာဇျသတ်တုတူးဖျောရေးကုမ်ပဏီမှ ဝယျယူရရှိခဲ့ပွီး ဖွဈသညျ။ သမ်မတ ဦးသိနျးစိနျအစိုးရလကျထကျတှငျ မှနျပွညျနယျအောကျပိုငျးဒသေဖွဈသညျ့ ရေးမွို့နယျတောငျပိုငျး ယခငျခေါဇာ မွို့နယျခှဲတဝိုကျ မိထောလှာကွီးရှာမှ မနျကြီးကြေးရှာ၊ ဓနိကွာနှငျ့ မှနျပွညျနယျတောငျပိုငျး နယျစပျအဆုံးထိ ဧရိယာကို သဘာဝ အခွခေံခရီးသှားလုပျ ငနျး (Eco Tourism) ဇုနျအဖွဈ မှနျ ပွညျနယျအစိုးရက သတျမှတျထားပွီး ဖွဈသညျ။ http://burmese.monnews. org/2020/06/15/%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးမှာ တပျမတျောနှငျ့ ရခိုငျ့တပျအအေတေို့ တိုကျပှဲကွောငျ့ ဘေးလှတျရာ ထှကျပွေးလာသူမြား ခိုလှုံ ရနျဖှငျ့လှဈထားသညျ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျး အရအေတှကျ (၁၁၁) ခု ရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစုမြား အစညျးအရုံး (REC) က ကောကျယူထားသော အခကျြအလကျမြားအရ သိရသညျ။
အဆိုပါ ဒုက်ခသညျစခနျးမြားမှာ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျတှငျ ၁၀ ခု၊ ကြောကျတျောမွို့နယျတှငျ ၂၀ ခု၊ မွောကျဦးမွို့နယျတှငျ ၂၇ ခု၊ မငျးပွားမွို့နယျတှငျ ၉ ခု၊ မွပေုံမွို့နယျတှငျ ၁၈ ခု၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျတှငျ ၂၅ ခု၊ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတှငျ ၈ ခု၊ မောငျတောမွို့နယျတှငျ ၂ ခု၊ စဈတှမွေို့ပျေါတှငျ ၁၈ ခုနှငျ့ ပေါကျတောတှငျ ၄ ခု ဖွဈကွောငျး REC က ထုတျပွနျထားသညျ။ ထိုစဈဘေး ရှောငျစခနျးမြားအနကျ တဈခြို့စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ လူပေါငျးထောငျခြီထိ နထေိုငျကွပွီး လကျရှိ ရခိုငျပွညျ နယျတှငျ စဈဘေးရှောငျဦးရစေုစုပေါငျး နှဈသိနျးခနျ့ရှိနပွေီဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ တဈခြို့စဈဘေးရှောငျစခနျးမြားကို စာသငျ ကြောငျးမြားတှငျ ဖှငျ့လှဈထားခွငျးဖွဈပွီး ယနဇှေ့နျလ ၁၅ ရကျ နောကျဆုံး ဖယျရှားပေးရမညျဟုဆိုသျောလညျး ကြောကျတျောမွို့ပျေါက စာသငျကြောငျး ခုနှဈကြောငျးတှငျ ခိုလုံနသေညျ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျ ၃၀ဝဝ ကြျောကို နရောပွောငျး ရှဖေို့ အခကျအခဲ နှငျ့ ရငျဆိုငျနကွေရသညျ။
ကြောကျတျောမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမောငျသနျးစိနျက “ရှပွေီးရငျပွနျထားမယျ့နရောတှေ လိုအပျတဲ့ အခါ ဒီကနေ့ နောကျဆုံးထား လုပျပေးနိုငျဖို့ အခွအေနကေ မလှယျဘူး။ လကျတှလေု့ပျရတဲ့ အလုပျတှကေ ခကျခဲပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။ ယငျးအပွငျ စဈရှောငျအမြားစုမှာ တဲအိမျသာသာဆောကျလုပျထားသညျ့ အမိုးအကာအောကျတှငျ ဖွဈသလို နထေိုငျနကွေခွငျးဖွဈပွီး မိုးသကျလပွေငျးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ နထေိုငျရေးအပွငျ စားဝတျနရေေးအပိုငျးမှာလညျး အခကျအခဲ တခြို့ ရှိနကွေသညျ။
ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျစောဝကေ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားသညျ မွို့ပျေါ ရပျကှကျမြားတှငျ လကျသမား၊ ပနျးရံ စသညျ့အလုပျမြားကို လုပျကိုငျပွီး စားဝတျနရေေးအတှကျ ဖွရှေငျးနကွေကွောငျးပွော သညျ။“တိုကျပှဲဖွဈလို့ ပွေးလာရတယျ၊ ပွနျသှားရတယျဆိုတော့ စားဝတျနရေေးအခကျအခဲဖွဈတဲ့ စဈရှောငျတှေ အမြားစု ကတော့ ရသတေ့ောငျမွို့ပျေါမှာပါပဲ ပနျးရံလုပျတယျ။ ရတဲအလုပျတှကေို လုပျပွီးတော့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပွုပွီး နထေိုငျကွတယျ”ဟု ဒျေါခငျစောဝကေ ပွောသညျ။ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အုနျးခြောငျးကြေးရှာအနီးတှငျ ဇှနျလ ၁၄ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးကလညျး တပျမတျောနှငျ့ ရခိုငျ့တပျအအေတေို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုကွောငျ့ အနီးအနားရှိ ကြေးရှာပေါငျး ၁၀ ရှာကြျော က ကြေးရှာသားအမြားအပွား ဘေးလှတျရာနရောမြားသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ http://www.mizzi maburmese.com/article/70710
မှနျပွညျနယျနှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတို့၏ လကျရှိကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီးမြားဖွဈသညျ့ စောအောငျမွငျ့ခိုငျ နှငျ့ နျောပနျးသဉ်ဇာမြိုးတို့သညျ့ အဆိုပါ နရောမြားအတှကျ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွနျအရှေးခံတော့မညျမဟုတျကွောငျး ကအေိုငျစီသို့ ဇှနျ ၁၅ ရကျနတှေ့ငျ အတညျပွုပွောကွားသညျ။ “ ကမြ ရနျကုနျတိုငျးရဲ့ ကရငျရေးရာဝနျကွီးနရောအတှကျ လြှောကျလှာပွနျမတငျ ဖွဈဘူး”ဟု ဝနျကွီး နျော ပနျးသဉ်ဇာမြိုးက ပွောသညျ။ သူမသညျ လကျရှိရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့တှငျ ကရငျ့ရေးရာအပွငျ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးနှငျ့ ပွနျကွားရေး ဌာနတို့ကိုလညျး တာဝနျယူထားသူတဈဦးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အလားတူ မှနျပွညျနယျ ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျသညျလညျး မှနျပွညျနယျ ကရငျရေးရာ ဝနျကွီးနရောကို ပွနျအရှေးခံတော့မညျမဟုတျကွောငျး ကအေိုငျစီသို့ ယခုလို ပွောသညျ။ “ အဓိက ကတော့ ကိုယျဘာလုပျ ပေး နိုငျလဲ၊ ကိုယျဘာလုပျခငျြလဲ၊ ကိုယျဘယျနရောနဲ့ သငျ့တျောလဲဆိုတဲ့ အပျေါမှာပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျတာပါ။ ပါတီက တာဝနျ ပေးမယျဆိုရငျတော့ အခွားနရောမှာ ပွနျတာဝနျထမျးဆောငျ သှားဖို့တော့ ရှိပါတယျ” ဟု ဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျက ပွော သညျ။
ယခုလို ဝနျကွီး စောအောငျမွငျ့ခိုငျ ရေးရာနရော ပွနျမဝငျတော့သညျ့အတှကျ မှနျပွညျနယျ ကရငျတိုငျးရငျးသား လူမြိုးရေးရာ ဝနျကွီးနရောကို ပေါငျမွို့နယျသား ဒေါကျတာ စောသာစိနျက အဆိုပွုလှာတငျထားသညျဟု မှနျပွညျနယျအတှငျးရှိ ကရငျ အသိုငျးအဝိုငျးကဆိုသညျ။ ထို့အပွငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကရငျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး နရောကို ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီး အမြိုးသမီး အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈဦးဝငျပွိုငျဖှယျရှိသညျဟု သတငျးပျေါထှကျနသေျောလညျး ကအေိုငျစီက သီးခွားအတညျပွုခကျြမရရှိဖွဈနသေညျ။ လကျရှိကရငျပွညျနယျပွငျပ မှနျပွညျနယျ၊ တနင်ျသာရီ၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ နှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတို့တှငျ ကရငျတိုငျးရငျးသား ရေးရာဝနျကွီး ၅ ဦးရှိပွီး ၎င်းငျးတို့အားလုံးသညျ NLD ပါတီဝငျမြား ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%9b%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%
သြှမျးပွညျနယျတှငျးရှိ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား သြှမျးပွညျတှငျး ပွနျလညျဝငျရောကျလာသူ ၄ သောငျးကြျော ရှိပွီ ဖွဈကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ဖဖေျောဝါရီ မှ စပွီး ဇှနျ လ ထိ သြှမျးပွညျတှငျးရှိ သကျဆိုငျရာ နယျစပျဂိတျမှာ တဆငျ့ ပွနျလညျ ဝငျရောကျလာသူ စုစုပေါငျး (၄၂၉ ၉ ၅) ဦး ရှိပွီ ဖွဈကွောငျး သြှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။“သြှမျးပွညျနယျတဈခုလုံးမှာ Facility Quarantine (၅၁၇) နရော ပွုလုပျထားတယျ” ဟု လူမှုရေးဝနျွကီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
ထို မွနျမာ ရှပွေ့ောငျး အလုပျသမားမြားသညျ မူဆယျ ရှနေနျးတျောဂိတျ၊ လောကျကိုငျ ခငျြးရှဟေျောဂိတျ၊ တာခြီလိတျ တံတားအမှတျ (၂) နှငျ့ မွဝတီနယျစပျဂိတျ တှမှော အသီးသီး ပွနျလညျဝငျရောကျလာကွသညျ။ မူဆယျဂိတျ၊ လောကျကိုငျ ခငျြးရှဟေျောဂိတျမှပွနျလညျဝငျရောကျလာသညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျး အလုပျသမားအမြားစုသညျ စဈကိုငျးတိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျး တို့ အမြားစုဖွဈကွသညျ။ “တခွားတိုငျးနဲ့ ပွညျနယျက သူတှဆေိုရငျတော့ သကျဆိုငျရာ သြှမျးမွောကျဆိုရငျကား နဲ့ လားရှိုး ကို ပို့တယျ။ လားရှိုးကနတေဆငျ့ ရထားနဲ့ သကျဆိုငျရာ တိုငျးနဲ့ ပွညျနယျကို ပွနျပို့ပေးတယျ”ဟု ဒေါကျတာမြိုးထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
သြှမျးပွညျတှငျး ပွနျလညျဝငျရောကျလာသူ (၄၀ဝဝဝ) ကြျောသညျ Quarantine ပွညျ့ပွီး ပွနျသှားသူ ( ၃၀ဝဝဝ) ကြျောရှိပွီး လကျရှိခြိနျထိ Home Quarantine (၅၀ဝဝ) ကြျော နှငျ့ Facility Quarantine ( ၁၀ဝဝ) ကြျော ကနျြရှိထားကွောငျး သိရ သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17082
ကခငျြပွညျနယျတှငျ ဆိုကျရောကျနပွေီဖွဈသော ထိုငျးပွညျတျောပွနျ ၇၀ဝ ကြျောအနကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ၄၄ ယောကျကို စဈဆေးခဲ့ရာ တဈဦးမြှပိုးမတှရေ့သေးကွောငျး ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ ထုတျပွနျခကျြအရသိရသညျ။ မလေ ကုနျပိုငျးကစပွီး ကခငျြပွညျနယျအစိုးရက ထိုငျးပွညျတျောပွနျမြားကို စတငျလကျခံခဲ့ရာ လကျရှိတှငျ စုစုပေါငျး ၇၂၆ ဦး ရှိနေ ပွီဖွဈသညျ။
“ထိုငျးကပွနျလာတဲ့သူတှကေို ဟိုမှာလညျးစဈခဲ့တာပေါ့။ ပွီးမှ ဒီကိုပို့တယျ။ ဒီမှာလညျးရောကျတော့လညျး ၂၁ ရကျ ကှာရနျတငျး ထားတယျ။ ပွီးမှ ဆေးစဈဆေးမှုတှပွေုလုပျတာပေါ့။ အဲ့ထဲမှာ အခု ပထမ စဈတဲ့ထဲမှာ ၄၄ရောကျက ပိုးမတှေ့ ရဘူးပေါ့လေ” ဟု ပွညျနယျ Covid-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေး ကျောမတီမှ ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးတငျ့နိုငျ က ပွောသညျ။
ဇှနျလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျလညျး ထိုငျးပွညျတျောပွနျ ၁၄၃ ဦး ပွနျလညျရောကျရှိလာမညျဟု သူက ဆကျလကျပွောဆိုခဲ့သညျ။
မွဈကွီးနားမွို့အတှငျး ထိုငျးပွညျတျောပွနျမြားကို ပညာရေးကောလိပျကြောငျး၊ သားဖှားသငျတနျးကြောငျးနှငျ့ ဟိန်ဒူဘုရား ကြောငျး စသောနရောတှငျထားရှိပွီး စုစုပေါငျး၂၅၄ဦးခနျ့ရှိကွောငျး မွဈကွီးနား မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသနျးဝငျး ထံမှ သိရသညျ။ ကနျြရှိသူမြားကို ၎င်းငျးတို့သကျဆိုငျသော မွို့နယျအလိုကျ ကှာရနျတငျးထားရှိနကွေောငျး သိရသညျ။ https://b urmese.kachinnews.com/2020/06/12/return-from-thailand/
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့တှငျ Facility Quarantine ဝငျထားသညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား (၂၀ဝ) ကြျော ၏ ဓါတျခှဲနမူနာ အားလုံး Negative ဖွဈကွောငျး စုံစမျး သိရှိရသညျ။ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့ အနီးတဈဝိုကျမှာ Facility Quarantine (၁၀) ခု ထားရှိပွီး Facility Quarantine ၂ နရောမှာ ဓါတျခှဲ နမူနာ အားလုံး Negative ဖွဈကွောငျး စုံစမျး သိရှိရသညျ။
“တောငျကွီး ကှနျဗြူတာ တက်ကသိုလျနဲ့ ကမ်ဘောဇ ဿသနာ့ ဗိမာနျ မှာ facility quarantine ဝငျထားတဲ့သူ ဓါတျခှဲအဖွတှေေ အားလုံး Negative ဖွဈတယျလို့ ကနြျောတို့ ဒီနမှေ့ သိရပါတယျ”ဟု Facility Quarantine တှငျ ဝငျရောကျ ကူညီပေးနေ သညျ့စတေနာ့ဝနျထမျး ကိုဝငျးနိုငျစိုး ကသြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ ကှနျဗြူတာ တက်ကသိုလျတှငျ Facility Quarantine ဝငျထားသညျ့ သူ (၁၅၅) ဦး နှငျ့ ကမ်ဘောဇ ဿသနာ့ ဗိမာနျ မှာ (၁၃၄) ဦး တို့၏ ဓါတျခှဲအဖွအေားလုံး Negative ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ထို Facility Quarantine ဝငျသူ ၂၀ဝ ကြျောသညျ့ ယနေ့ ကားစီစဉျပေးကာ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျ မြားပွနျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ကိုဝငျးနိုငျစိုး က ပွောသညျ။“၂၅ ရကျနထေိ့ နောကျထပျ ဝငျရောကျလာဖို့ ရှိတယျလို့ သိရတယျ။ အားလုံးက မွဝတီ ဘကျက ဝငျလာမယျ့သူတှပေဲ” ဟု ကိုဝငျးနိုငျစိုး ကပွောသညျ။
အဆိုပါ နရေပျပွနျမြားသညျ တောငျကွီးမွို့နယျအတှငျး သတျမှတျထားသညျ့ Facility Quarantine စခနျး ၁၀ ခုတှငျ အသီး သီးရောကျရှိပွီး ၅ ရကျမွောကျနတှေ့ငျ ဓါတျခှဲနမူနာ စတငျစဈဆေးကွောငျး သြှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17108
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဒသေမလုံခွုံမှုကွောငျ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးတှေ တာဝနျက နုတျထှကျနသေလို အကွမျးဖကျအဖှဲ့ တှကေို ရိက်ခာထောကျပံ့ပေးလို့ ဖမျးဆီးအရေးယူခံရတဲ့ အုပျခြုပျရေးမှူးတှလေညျးရှိတယျလို့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဒုဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွပေုံမွို့နယျမှာ ပွီးခဲ့တဲ့သီတငျးပတျက ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ၅၈ ဦး နုတျထှကျ ခဲ့ပွီး သူတို့နရောကို ပွနျလညျခနျ့အပျနိုငျဖို့ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ဒီနရောမှာ မိမိဆန်ဒသဘော အလြောကျ နုတျထှကျသူတှရှေိသလို ဖမျးဆီးအရေးယူခံထားရသူတှလေညျး ရှိတယျလို့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဒုဝနျကွီး ဦးတငျမွငျ့က ဒီကနေ့ နပွေညျတျောမှာ ကငျြးပတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောပါတယျ။
“အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ဖမျးဆီးခွငျး၊ စဈဆေးခွငျး၊ ရိုကျနှကျခွငျး၊ သတျဖွတျခွငျး အထိတောငျခံရတယျ။ အဲဒါ ကွောငျ့လညျး တခြို့ရပျကှကျ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးတှကေ မလုပျလိုဘူးဆိုပွီး ထှကျကွတယျ။ အဲဒီထဲမှာ တခြို့ရပျကှကျ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးကတြော့လညျး ဒီအကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးပါဆိုပွီး ကွညောထားတဲ့အဖှဲ့ကို ရိက်ခာတှပေို့တယျ။ ငှကွေေးတှေ ထောကျပံ့တယျ။ ဒါတှဟောဖွဈလာတော့ကွညောပွီး ဥပဒအေရပွောပွီးတဲ့နောကျ ဖွဈလာတဲ့သူတှကေို တပျမတျောကနပွေီးတော့မှ ဒါတှကေို စုံစမျးစဈဆေးတယျ။ ပွီးရငျ ရဲတပျဖှဲ့ အပျနှံပွီးတော့ အကွမျးဖကျဥပဒနေဲ့ပေါ့ အရေးယူ ဖို့ရာဆိုပွီး လုပျထားတာ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံတျောအစိုးရသျောလညျးကောငျး၊ တပျမတျော၊ ရဲတပျဖှဲ့ကတော့ ဒီအပျေါမှာ ဥပဒနေဲ့အညီပဲ ဆောငျရှကျတာဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။
ဒီလို နုတျထှကျသှားတဲ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးတှနေရောမှာ အစားထိုးခနျ့အပျနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျနသေလို နုတျထှကျသှားသူ တှကေ ပွနျလညျတာဝနျထမျးဆောငျလိုပါကလညျး ဆောငျရှကျပေးဖို့ အသငျ့ရှိနတေယျလို့ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံး ဝနျကွီးဌာန၊ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနက ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးမွငျ့သနျးက ပွောပါတယျ။ “အခုထှကျတယျဆိုတာ ကလညျး နယျမွဒေသေ မလုံခွုံလို့၊ မအေးခမျြးလို့ ထှကျရတာပါ။ သူ့စိတျဆန်ဒမူရငျးအရတော့ ထှကျခငျြလို့ထှကျတာ မဟုတျ ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ အခုလိုမြိုး မအေးခမျြးတဲ့အခြိနျမှာ ထှကျကောငျးထှကျပမေယျ့ ဒသေလုံခွုံတယျဆိုရငျ ရပျရှာအကြိုး အတှကျ ဆောငျရှကျခငျြတဲ့စိတျ အပွညျ့ရှိမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့လို့ အခုလိုမြိုး မလုံခွုံလို့ထှကျတဲ့အပျေါမှာ လညျး ကနြျောတို့ ဌာနအနနေဲ့ အပွဈရှိတဲ့သူတဈယောကျအနနေဲ့ မွငျတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွနျလညျတာဝနျထမျးဆောငျ မယျဆိုရငျလညျး အခြိနျမရှေး ပွနျလညျတာဝနျထမျးဆောငျဖို့အတှကျ စီမံဆောငျ ရှကျပေးဖို့ အသငျ့ရှိပါတယျ”လို့ အစိုးရ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးမှာ နယျမွဒေသေ မလုံခွုံမှုကွောငျ့ အုပျခြုပျရေးမှူးတှေ နုတျထှကျနပေမေဲ့ အခြိနျမီ ပွနျလညျခနျ့အပျ နိုငျဖို့ ဆောငျရှကျနတောကွောငျ့ အရပျဘကျ အုပျခြုပျရေးနရောမှာ စဈအုပျခြုပျရေးဝငျလာဖို့အထိ မဖွဈနိုငျသေးဘူးလို့လညျး ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံး တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/394366
ရှမျးပွညျနယျ မဘိမျးမွို့နယျမှာ ငှကေပျြသိနျး ၁၄,ဝဝဝ ကြျော တနျဖိုးရှိ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွားတှေ ဖမျးဆီးရမိတယျလို့ ပွညျထဲရေးက ထုတျပွနျပါတယျ။
ဇှနျလ ၁၂ ရကျနေ့ ညနေ ၄ နာရီခှဲ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှပေါဝငျတဲ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့ဟာ မဘိမျးမွို့နယျ၊ ခတျခုံကြေးရှာအုပျစု၊ ခတျခုံကြေးရှာ-မိုမငျတနျသဈထုတျလုပျရေးသှားလမျး၊ သဈဖှဲ့ပငျပွနျ့ဆငျစခနျးရှိ အောငျကြျောကြျောရဲ့ နအေိမျတဲကို ရှာဖှေ ရာ ထှနျးကွိုငျအား အတူတှရှေိ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
နအေိမျတဲထဲကနေ ကပျြသိနျး ၁၄,၂၂၀ တနျဖိုးရှိ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား ၇၁၁,ဝဝဝ ပွား သိမျးဆညျးရမိခဲ့ပွီး အောငျကြျော ကြျော နဲ့ ထှနျးကွိုငျ တို့ကို မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ စိတျကိုပွောငျးလဲစသေော ဆေးဝါးမြားဆိုငျရာဥပဒအေရ အရေးယူထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/394125
ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့၊ ကြေးပငျကွီးရပျကှကျရှိ ကမ်ဘောဇဘဏျခှဲ(၂)မှ ငှလေုယကျမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး သံသယဖွငျ့ ဖမျးဆီး ခံထားသူတဈဦးကို မွို့နယျတရားရုံး၌ ခြုပျရမနျယူထားကွောငျး မိသားစုထံမှ သိရသညျ။ ဇှနျလ ၁ဝ ရကျနေ့၊ ညနေ ၄ နာရီ ကြျောခနျ့က KBZ ဘဏျခှဲ(၂)ကို အမညျမသိမကျြနှာဖုံးစှပျ လူ(၄)ဦးက Hi Jet အဖွူရောငျကားတဈစီးဖွငျ့ လာရောကျကာ ငှမြေားကိုလုယူခဲ့သဖွငျ့ ငှကေပျြသိနျး ၁၈၀ဝ ကြျောပါသှားခဲ့ကွောငျး တပျမတျောက သတငျးထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ယငျးကိစ်စ တှငျ ကြူးလှနျသူမြားကို လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက လိုကျလံဖမျးဆီးခဲ့ရာတှငျ သံသယရှိသူတဈဦးကို မျောတျောယဉျနှငျ့အတူ ဖမျးမိခဲ့ပွီး ကနျြ ၃ ဦးမှာ ဘဏျမှငှမြေားနှငျ့အတူ ထှကျပွေးနဆေဲဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
လကျရှိ ဖမျးဆီးစဈဆေးခံနရေသူမှာ စဈတှမွေို့၊ ကုနျးတနျးရပျကှကျမှ ကားအငှားမောငျးသူ စိုးမငျးထှနျးဆိုသူဖွဈပွီး ၎င်းငျးကို ဇှနျလ(၁၁)ရကျနကေ့ စဈတှမွေို့နယျတရားရုံး၌ ခြုပျရမနျယူခဲ့ကွောငျး ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါတငျတငျဝငျးက DMG သို့ ပွောသညျ။ “သူ့ကို ရမနျယူထားတယျ။ ၂၅ ရကျနေ့ ရုံးခြိနျးထားပါတယျ။ သူနဲ့ကမြတို့ တှခှေ့ငျ့မရသေးပါဘူး။ အမှတျ(၁) ရဲစခနျးမှာ ထိနျးသိမျးထားတယျ။ ထမငျးပိုရငျလညျး စခနျးအဝမှာ ထားခဲ့ရတယျ။ သူ့ဆီက စကားတှကေို ဘာမှမကွားရသေးဘူး။ ရမနျ ယူတုနျးကလညျး သူနဲ့စကားမပွောလိုကျရပါ ”ဟု ဒျေါတငျတငျဝငျးက ဆိုသညျ။ အခငျးဖွဈသညျ့နကေ့ ကိုစိုးမငျးထှနျးမှာ ကားမောငျးရနျထှကျသှားပွီးနောကျ ဖမျးဆီးခံရသညျဆိုသညျ့ သတငျးကိုသာ မိသားစုဝငျမြားက သိရှိထားပွီး မညျကဲ့သို့ ဖွဈသှားသညျကို ကာယကံရှငျနှငျ့ မတှရေ့သေးသဖွငျ့ သိရှိခွငျး မရှိသေးကွောငျး ဆိုသညျ။
DMG မှ စဈတှအေမှတျ(၁)ရဲစခနျးသို့ သှားရောကျပွီး စခနျးမှူး ဒုရဲမှူးအောငျမွဦးအား တှဆေုံ့မေးမွနျးရနျ ကွိုးပမျးခဲ့သျော လညျး မအားသေးဟုသာ တုနျ့ပွနျခဲ့သညျ။ ပွညျနယျအစိုးရုံးမြားတညျရှိရာ စဈတှမွေို့တှငျ ယခုကဲ့သို့ ဘဏျမှငှလေုယူမှုမြား ဖွဈပှားလာသညျ့အပျေါ မွို့သူမွို့သားမြားက စိုးရိမျမှုမြားဖွဈပျေါနကွေသညျ။“ဒီစဈတှမွေို့ပျေါမှာတောငျ ဓားထိုးမှုတှေ၊ လုယကျမှုတှေ ဒီလောကျဖွဈနတေယျ။ အနျတီတို့အနနေဲ့ ဘာမှလုံခွုံမှုမရှိဘူး၊ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ဒသေခံတှအေကုနျလုံး စိုးရိမျနကွေတယျ” ဟု စဈတှမွေို့ခံ ဒျေါဖွူဖွူသနျးက ဆိုသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73479